ကျွန်ုပ်သည်ဖြောင့်သော်လည်းလိင်အင်္ဂါနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူများကိုဆွဲဆောင်သည် (သို့မဟုတ်လိင်တူချစ်သူလိင်တူချစ်သူများအားဆွဲဆောင်ခြင်း) ။ ဘာတွေထူးလဲ? - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
မှတ်စု: ဤစာမျက်နှာတွင်လူများ (အချို့သည်အခြားသူများထက်နိုင်ငံရေးအရပိုမိုမှန်ကန်သောအရာများ) မှလူများတင်ပြသောအစီရင်ခံစာများပါ ၀ င်သည်။ သူတို့သည် porn ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးသည့်နောက်သူတို့၏ porn အရသာများသည်လိင်ဆက်ဆံမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းကောက်ချက်ချပြီးသူတို့၏အရသာပြန်ပြောင်းသွားသည်ကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။ ဤအစီရင်ခံစာသည်ညစ်ညမ်းသောပြန်လည်နာလန်ထူရေးဖိုရမ်များမှဖြစ်သည်။ YBOP သည်၎င်းတို့အားအတော်များများကောက်နုတ်ထားသဖြင့်စာရေးသူ၏အမြင်များ / ပင်ပန်းမှုသည်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်၏ထင်မြင်ချက်များကိုမထင်ဟပ်နိုင်ပါ။ သင်သည်သင်၏လိင်အရသာနှင့်ရောင့်ရဲပါက၊ သို့မဟုတ်သင်၏လိင်အရသာကိုသတ်မှတ်ထားသည်ဟုခံစားရပါကနောက်ထပ်မဖတ်ပါနှင့်။ ဤစာမျက်နှာသည် ၀ တ္ထုများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းသောလိင်မှုကိစ္စကိုအရှိန်မြှင့်တင်ခြင်းသည်သူတို့၏အစောပိုင်းသို့မဟုတ်ပင်ရင်းလိင်အရသာကိုဖုံးကွယ်နေလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သူများအတွက်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာ HOCD ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
သင် OCD ရှိပါကသတိပြုပါ:
သငျသညျ obsessive compulsive ရောဂါ (OCD) ရှိပါကကျွန်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုသင် OCD အထူးသူတစ်ဦးတိုင်ပင်သို့မဟုတ်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ HOCD နှင့်အတူအချို့သောဆေးဝါးများနှင့်သင့်လျော်သောကုထုံးကနေကိုအလွန်အကြိုးခံစားကြပြီ။
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှရှောင်ကြဉ်သောသူသည်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး compulsive ရောဂါသို့မဟုတ် OCD သဘောထားတွေနဲ့အတူသူများသည်တိုးမြှင့်လက္ခဏာတွေတွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။ ပင် ယာယီ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှ abstinence သင်တို့အဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
YBOP OCD ရှိသူများအောက်က HOCD ကို restart အကောင့်ကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်သင်တို့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်သောအရာကိုသူတို့ထံမှယူအကြံပြုထားသည်။ အဘယ်သူမျှမတလမ်းတည်းရှိပါသည်။
ဒီမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအတော်များများလိင်တူဆက်ဆံ obsessive compulsive ရောဂါ (HOCD) နဲ့ရှိသူများကိုဦးတည်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအကြံပြုချက်အများစုကို porn စွဲသို့မဟုတ် porn-သွေးဆောင် fetishes နှင့်အတူသူတို့အားလျှောက်ထားနိုင်ကပြောသည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းပစ္စည်း:
နောဧသည်ဘုရားကျောင်းအားဖြင့် Excellent ကဗီဒီယိုက: လက်ခံရရှိ Porn အကဲခတ်ဖြောင့်ယောက်ျားများ? သူတို့ကဂေးဖြစ်ပါသလား
ပိုလန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားများအတွက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု၏ပျံ့နှံ့မှု, ပုံစံများနှင့်ကိုယ်ပိုင်ခံစားသက်ရောက်မှု: တစ်ဦးက Cross-Section လုံးy (2019) ဤကြီးမားသောလေ့လာမှုကပိုမိုပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအရှိန်မြှင့်တင်ခြင်းကိုတွေ့ရသည် -“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုပုံစံအပြောင်းအလဲများ - ရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းအမျိုးအစား (46.0%) သို့ကူးပြောင်းခြင်း၊ လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ (60.9%) ကကိုက်ညီမှုမရှိပါပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်း ပိုမိုပြင်းထန်သော (အကြမ်းဖက်မှု) ပစ္စည်းများ (၃၂.၀%) ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ”
သငျသညျကွညျ့ရှုပို porn, ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်သငျသညျရိုးရိုးဖြစ်ရကြမည်: လေ့လာမှု (2019)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ orientation ကိုလျော့ပြေအပေါ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-လူနည်းစုသိပ္ပံပညာရှင်များက TEDx ဟောပြောပွဲ
Guf ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (စိတ်ရောဂါ HOCD အကြောင်းကို theorizes)
သူသည် aripiprazole [dopamine agonist] ကိုသူ၏ကုသမှုအစီအစဉ်တွင်မိတ်ဆက်ပြီးတစ်လအကြာတွင်သူနှင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်တူချင်းစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းစသည်ဖြင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းလိုအပ်သည်ဟူသောတိုင်ကြားချက်ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုမကြာခဏအသုံးပြုခဲ့သည်။ ... လူနာအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့သည်နှင့် hypipexuality များအတွက်အကြောင်းပြချက်ကြောင့် aripiprazole ကြောင်းပြတ်ပြတ်သားသားဖြစ်ခဲ့သည်။ aripiprazole ကိုလေးရက်မှခြောက်ရက်ခန့်ရပ်ဆိုင်းပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်ခန့်အကြာတွင်လိင်အပြုအမူသည်စပြီးသက်သာသွားသည်။ လူနာသည်ပုံမှန်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းခံထားရပြီးမည်သည့်လိင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှမပါဘဲကောင်းစွာနေနိုင်သည်။
လေ့လာချက်: Gynandromorphophilic အမျိုးသားများအတွက်သူကားအဘယ်သူဖြစ်ပါသလား လိင်အမျိုးသမီးများအတွက်လိင်စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်အတူယောက်ျား၏အင်တာနက်စစ်တမ်း. စက္ကူမှ:
အဆိုပါ အဓိကဆောင်းပါး အောက်ပါလင့်များအုပ်စုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်စတင်သည်။ ပထမပိုင်းတွင်ညစ်ညမ်းသော HOCD (သို့) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပါဝင်သောအမျိုးသားများ၏အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများ (အကောင့်များအားပြန်လည်စတင်သည်) ပါရှိသည်။ (ဤစာမျက်နှာ၏နောက်ဆုံးအပိုင်းသည်ယောက်ျားများကိုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းမှအကြံဥာဏ်များဖြစ်သည်။ ) သင်စိုးရိမ်စိတ်ကိုအေးဆေးငြိမ်သက်စွာထားလိုပါကပြန်လည်ဖွင့်ခြင်းအကောင့်များပြီးနောက်ဖော်ပြထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုလိုသည်၊ ။ သို့မဟုတ်ဤဆောင်းပါးကဲ့သို့သောကျွမ်းကျင်သူများအပိုင်းဖြင့်စတင်ပါ။ နံနက်ငါဂေး? obsessive-compulsive Disorder အတော်များများ Form များယူ။ ဤသည်ကနေတစ်ခုကောက်နုတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်:
ဟယ်လို! ငါ့နာမကိုမာကုသည်, ငါနှင့်အတူတစ်လိင်တူချစ်သူအထီးဖြစ်ကြောင်းကို obsessive-compulsive ရောဂါ (OCD) ။ ငါ (စအဖြစ်လူသိများလိင်တူချစ်သူဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဤဆောင်းပါးကိုသုံးစွဲဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်သူကိုလိင်ကွဲရှေးရှေးများ၏အကျိုးအတွက်ရေးသားနေပါတယ် လိင်တူချစ်သူ OCD သို့မဟုတ် HOCD) ။ အဘယ်သူမျှမစိုးရိမ်မှုတွေ, ငါ့မိတ်ဆွေတစ်: သင်ကိုယ်သင်သို့မဟုတ် HOCD သူသည်သင်နှင့်နီးစပ်သောသူတစ်ဦးဦးနားလည်ရန်ကြိုးစားနေနေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်လက်ျာဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုနေကြသည်။
နည်းဥပဒေတဦးတည်း: သင်လိင်ကွဲကြသည်ဟုပြောလျှင်, သငျသညျဖြစ်ကြသည်။ ကာလ။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဖတ်ပါနှင့်နာခံရန်အချိန်ကိုယူပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါသည်ငါ၏စစ်မှန်သောအသက်တာ၌ဆရာဖြစ်ကြောင်းကို, အစဉ်မပြတ်ငါအစောပိုင်းအပေါ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုထွက်စာလုံးပေါင်း။
ငါ HOCD အားဖြင့်သင်တို့လမ်းလျှောက်အဖြစ်ယခုငါတို့အတူတူအတွေးအခေါ်တွေကနေဒီမှာလာမယ့်ဖြစ်ကြောင်း, ငါ့ကိုသည်းခံပေးပါ။
compulsive porn အသုံးပြုသူများကိုမကြာခဏ porn သစ်အမျိုးအစားများကြည့်ရှုသို့မဟုတ်ထုတ်ရှာကြံ သာ. ကြီးမြတ်အချိန်ပုံစံကြာသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုအတွက်တင်းမာမှုကိုဖော်ပြရန်။ ထိတ်လန့်, အံ့သြစရာ, မျှော်လင့်ချက်ချိုးဖောက်သို့မဟုတ်ပင်စိုးရိမ်စိတ်သွေးဆောင်ကြောင်းနယူးအမျိုးအစားများလိင်စိတ်နိုးထတိုးမြှင့်ဖို့လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်နှင့်သူ၏တုံ့ပြန်မှုလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်သုံးရင်ဖို့ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေကြီးထွားလာသည်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အတွက်နိုငျသညျ, ဤဖြစ်ရပ်ဆန်းအလွန် common.Norman ဖြစ်ပါတယ် Doidge MD ကသူ့အတွက်ဒီအကြောင်းရေးသားခဲ့သည် စာအုပ် ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက်:
လက်ရှိညစ်ညမ်းကပ်ရောဂါသည်လိင်ဆိုင်ရာအရသာများကိုရရှိနိုင်ကြောင်းပြသသည့်သရုပ်ပြမှုတစ်ခုပေးသည်။ မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုဖြင့်ဖြန့်ဝေသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုအတွက်လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုကျေနပ်အားရစေသည်။ ညစ်ညမ်းဓာတ်ပုံဆရာများသည်စာအိတ်အသစ်ကိုပိုမိုတင်းကျပ်စွာမိတ်ဆက်ပေးခြင်းအားဖြင့်မိမိတို့၏စာအိတ်ကိုတွန်းအားပေးနေသည်ဟုဝါကြွားသည့်အခါသူတို့ဖောက်သည်များသည်အကြောင်းအရာအပေါ်သည်းခံနိုင်မှုကိုတည်ဆောက်ပေးသောကြောင့်သူတို့မလုပ်သင့်ပါ။
လူ့လိင်ဖြစ်ပါသည် ကျွမ်းကျင်သူများသဘောပေါက်သည်ထက် "အခြေအနေ - နိုင်" ပို။ တစ်ဦးက 2016 လေ့လာချက် တွေ့ရှိခဲ့ တဝက် အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာသုံးစွဲသူများသည်ယခင်ကသူတို့တွေ့ရှိခဲ့သော“ စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်း၊အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ: ယောက်ျားတစ်နမူနာအတွက်ပြဿနာနှင့် Non-ပြဿနာအသုံးပြုမှုပုံစံများတစ်ခုကရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလေ့လာမှု)။ တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
ယခင်ကသူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်စဉ်းစားမကွကအနည်းဆုံးတစ်ခါတစ်ရံတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာဖွေနေသို့မဟုတ် OSAs တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖော်ပြခဲ့တဲ့လေးဆယ်ကိုးရာခိုင်နှုန်းဟာ [porn] ။
ဒီဘယ်လ်ဂျီယံလေ့လာမှုမှာပြpornနာရှိတဲ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းဟာ erectile လုပ်ဆောင်မှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ယေဘူယျအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုလျော့နည်းစေခြင်းနဲ့ဆက်စပ်နေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်းပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်ခံစားမှုများကိုခံစားခဲ့ရသည်။ (OSA's = အွန်လိုင်းလိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှု၊ အကြောင်းအရာသည် ၉၉% အတွက် porn ဖြစ်သည်။ ) စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်မှာပါဝင်သူ ၂၀.၃% ကသူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ“ ငါ့အဖော်နှင့်နှိုးဆွရန်” ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများနှင့်အကဲဖြတ်သုံးပြီးအများအပြားပိုပြီးလေ့လာမှုများ, အစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ Porn အသုံးပြုသူများအတွက်စက်လှေကား (နှင့်လေ့)။ ဥပမာ, ဒီ 2017 လေ့လာမှုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲမေးခွန်းအပြီးလုပ်ပါတယ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာ porn အသုံးပြုမှုမေးခွန်းလွှာဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်စမ်းသပ်ပြီး အဆိုပါပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုစကေး (PPCS) ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး။ ယခင်ညစ်ညမ်းဆေးစွဲခြင်းစမ်းသပ်မှုနှင့်မတူဘဲဤမေးခွန်း ၁၈ ခုပါသောမေးခွန်းလွှာသည်မကြာခဏညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများအတွက်သည်းခံခြင်းနှင့်အရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုအရှိန်မြှင့်တင်ခြင်းအတွက်စစ်ဆေးသောမေးခွန်းနှစ်ခု
ငါမပြုမီစောင့်ကြည့်ကြ porn လျော့နည်းစိတ်ကျေနပ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတဖြည်းဖြည်းပို "အစွန်းရောက်" porn watched
ငါသည်ငါ့လိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်နိုင်ရန်အတွက် ပို. ပို. ညစ်ညမ်းလိုအပ်ခံစားရတယ်
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒီ 2016 လေ့လာမှုသည်ယနေ့ (streaming) အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းမှလေးစားမှုနှင့်အတူလိင်အရသာတည်ငြိမ်ဖြစ်ကြောင်းယူဆချက်အပေါ်သံသယစေသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဂေးတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ခြင်း, ရိုးရိုးနှင့်လိင်ကွဲအမျိုးသားများ: လိင်အကဲဆတ်သောမီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားအားဖြင့်အသုံးပြုခြင်း) ။ ဒီလေ့လာမှုကနေကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
တွေ့ရှိချက်များအရအမျိုးသားများအနေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသိသာထင်ရှားသည့်အကြောင်းအရာ (SEM) ပါ ၀ င်မှုသည်၎င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့်မကိုက်ညီကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လိင်တူချင်းချစ်သူအမျိုးသားများသည်လိင်တူချင်းဆက်ဆံမှု (၂၀.၇%) ပါ ၀ င်သည့် SEM ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လိင်တူချစ်သူဖော်ထုတ်ထားသည့်အမျိုးသားများအား SEM တွင် (၅၅.၀%) ကြည့်ရှုခြင်းအားအစီရင်ခံရန်မှာလိင်ကွဲခြင်းမှဖော်ထုတ်သောအမျိုးသားများအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သောကိစ္စမဟုတ်ပါ။
အတူယူဒီလေ့လာမှုက, ဒီစာမျက်နှာပေါ်ရှိအခြားလေ့လာမှုများ, ယနေ့ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများနောက်ဆုံးတွင်သူတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့လိင်ရှာဖွေတွေ့ရှိ"ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များကိုဝင်တိုက်ခြင်း, ပြီးတော့ကျန်အချိန်များအတွက်တစ် ဦး တည်းသာ porn အမျိုးအစားကပ်။
HOCD သို့မဟုတ် porn-သွေးဆောင်လိင် fetish နှင့်အတူသူတို့၏အမျိုးအ recovery ပုံပြင်များ:
မှတ်ချက် - OCD ရှိသူများသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်မလိုဘဲ၊ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆိုင်သောစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသာပိုကောင်းသည်။ YBOP ကသင့်အားအောက်ပါ rebooting account များကိုဖတ်ပြီးသင့်အတွက်ဘာလုပ်ရမည်ကိုအကြံပြုသည်။ လမ်းမရှိဘူး။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန် - HOCD: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြစ်တွယ်နေသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ထွက်သရုပ်ဆောင်ခြင်း (တစ်ဦး MD ပြောထားပြီးအဘယ်အရာကိုဖတ်ပါ) ငါ ၁၁-၁၂ ပတ်လည်မှာစဖြစ်တာဖြစ်နိုင်တယ်၊ အခုငါအသက် ၂၂ နှစ်ရှိပြီ။ shemale & gay porns ကငါ့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေတာကြောင့် ၂ နှစ်နီးပါးလောက်ငါဟာလိင်တူချစ်သူဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့မိတယ်၊ ငါ့ဘဝရဲ့ဘယ်အချိန်မှာမဆိုငါဟာအရူးတစ်ယောက်ကိုမနှိပ်စက်ခဲ့ဘူး။
ရိုက်နှက် HOCD: YourBrainRebalanced အပေါ် Threading
[transwomen] အတွက် 134 ရက်ပေါင်းယခုလုံးဝဆွဲဆောင်မှုမရှိပုံရသည်။.. အရိုးတည်ဆောက်ပုံ၊ ပိုထူသောအသားအရေ၊ နဖူးကြီးများ၊ စတုရန်းမေးရိုးများ၊ ပခုံးများ၊ ကြံ့ခိုင်သောလက်မောင်းများနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပိုများလာသည်။ လိင်အင်္ဂါအ ၀ င်အမြင့်ဆုံးအမျိုးသမီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံတဲ့လိင်တံကိုကြည့်ရတာစိတ် ၀ င်စားစရာမရှိတော့ပါဘူး၊ အခုတော့ကျွန်တော်ဟာအနည်းငယ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းပေမယ့်ကျွန်တော်ဟာဒီထက်ပိုပြီးအသုံးပြုနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်…
၁၇၇ ရက် - မိန်းကလေးငယ်များအကူအညီဖြင့် ED & HOCD
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံမှမခေါက် - လိင်ခြားသူများအတွက်အရသာပျောက်ကွယ်သွားသည်၊
အာရုံစူးစိုက်မှု HOCD သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူအသီးအသီး!
အသက် ၁၅ - HOCD ဖွံ့ဖြိုးပြီးအစွန်းရောက်ပစ္စည်းများအထိတိုးများလာသည်။ ငါ porn စွဲလမ်းမှပြန်လည်ကောင်းမွန်ပါပြီ
အသက် ၁၆ - (ED) ။ သတင်းကောင်း: HOCD ကျော်၊ သတင်းဆိုး - ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုပြန်ခုန်ထွက်သွားတယ်
အသက် ၁၆ နှစ် - ၀ က်ခြံကြောင့်လိင်တူချစ်သူဟုကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့သည်
အသက် ၁၇ - HOCD & porn - သွေးဆောင် ED၊ ရက်ပေါင်း ၁၀၀
အသက် ၁၈ - ED သည်ကုသသော်လည်း HOCD ကိုတိုက်နေဆဲဖြစ်သည်
အသက် ၁၉ - HOCD ပျောက်ကွယ်နေသည်
အသက် ၂၀ - HOCD နှင့်အလွန်အမင်းလူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ် - ယခုကျွန်ုပ်ဘဝကိုချစ်မြတ်နိုးသည်။
(၂၁) နှစ် ၂၁ - အလွန်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအဖြစ်သို့ကူးစက်ခံရသည်။ porn ထွက်ဖြတ်တောက်ခြင်းအရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်။
အသက် ၂၁ ရက် ၇၉ ရက်ပျောက်ကင်းသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးလိင် (HOCD)
At (၂၁) နှစ် ၂၁ နှစ် - shemale porn မှယခုနှစ်နှစ်ကြာနေပါ။
အသက် ၂၁ - HOCD၊ စိုးရိမ်စိတ်၊ စိတ်ကျရောဂါ၊ ဦး နှောက်မြူ၊
(၂၁) နှစ် ၂၁ - အလွန်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအဖြစ်သို့ကူးစက်ခံရပြီးကျွန်ုပ်သည်ရိုးရိုးလိင်ဆန်သူဟုထင်ခဲ့သည်
အသစ်စတင် အသက် ၂၁ - PED သွေးဆောင် ED, HOCD နှင့် Vagina Phobia တို့သည်နှစ်အကြာတွင်ပျောက်ကင်းသွားသည်
အသက် ၂၂ - နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၊ PIED & OCD ကိုဖယ်ရှားရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာတွေ့ခဲ့သည်။
အသက် ၂၂ နှစ် - Porn ကကျွန်တော့်ကိုအရှိန်မြှင့်ပြီးဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်ခြင်းကကျွန်တော့်ဘဝကိုယခင်ကထက်ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည် - ၀ တ္ထုမရှိဘဲ၊ ခွံမာသီးအခွံထဲ၌ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးစွမ်းရည်များကိုပျက်ဆီးစေပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပြုမိစေသည်၊ ကျွန်ုပ်၏အမြဲတမ်းယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုပျောက်ကွယ်သွားစေပြီး၊ ကျွန်ုပ်အားအရာရာတိုင်းကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ fuck ဆိုတဲ့) ။ ယခုငါပြန်ကြည့်လိုက်သည်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြာကြာမကြည့်ဘဲနေပြီးနောက်အရာအားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်၏စိတ်သည်အလွန်တုန်လှုပ်နေပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်လိင်မှု (၁၀၀%) နှင့်အဆင်ပြေသည်။ ။ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကိုနွေးထွေးပြီးလိမ်နေတဲ့နင့်ကိုနို့တိုက်ကျွေးနေချိန်မှာမင်းရဲ့အတွေးတွေဘယ်လိုဝင်လာမလဲ။
အသက် ၂၂ - ED၊
အသက် ၂၂ - ED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ငါအသက် ၁၆ နှစ်ကစပြီး ED ။ ။ porn shemale မှပယ် jack ကိုနိုင်ဘူး။
အသက် ၂၃ - (ED) ၃ လ၊
အသက် ၂၂ - ကျွန်ုပ်သည်လိင် (autogynephilia) ဖြစ်နိုင်သည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုယနေ့မြင်လျှင်, ငါသည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့သည်မယုံကြလိမ့်မည်။
(၂၃) နှစ် - HOCD - ကျွန်ုပ်သည်သုညကနေသူရဲကောင်းသို့သွားရန် ၂.၅ နှစ်ကြာခဲ့သည်။
အသက် ၂၄ နှစ် - သုတ်ရည်လွှတ်မှုနောက်ကျခြင်းမရှိ၊ GF နှင့်ယခင်ကထက် ပို၍ ပျော်ရွှင်ခဲ့သည်။
အသက် ၂၄ နှစ် - ၅ နှစ်ပြန်လည်နာလန်ထူခြင်း၊
အသက် ၂၅ - ငါဟာအသစ်စက်စက်လူတစ်ယောက်လိုခံစားရတယ်။ (HOCD - ED)
အသက် (၂၅) နှစ် - ညစ်ညမ်းသော ED မှသည်ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းအထိဖြစ်သည်
၂၅ နှစ် - Abstinence တစ်ယောက်တည်းမလုံလောက်ပါ။ PIED အစွန်းရောက် & porn-induced fetishes မှသည်လိင်စက်အထိဖြစ်သည်
အသက် ၂၇ နှစ် - HOCD၊ OCD၊
အသက် ၂၈ - ရက်ပေါင်း ၉၀၊ အဖြေများနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများတိုးတက်လာသည်
အသက် (၂၈) နှစ် - ကျွန်ုပ်သည် ဦး နှောက်ကိုအထူးသဖြင့် shemale porn နှင့်ညှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရက်ပေါင်း ၉၀ ကျော်သမ္မာသတိ ရှိ၍ ပြန်လာမည်ကိုစိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည်.
အသက် ၂၈ နှစ် - HOCD နှစ် - သင်ဤ porn shit မှသင်ထွက်သွားလျှင်အမှန်တကယ်ကူညီသည်
အသက် ၃၀ - ၃၂ ရက်ခက်ခဲသည့်အခြေအနေ။ Fighting HOCD ။
(၃၇) နှစ် - HOCD & PIED - အခုအချိန်မှာတော့ဒီပြissuesနာတွေဟာပြီးသွားပြီလို့ငါစိတ်ချနိုင်တယ်
ငါ့အသက်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီ: ED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ, လိင်နှင့် ပတ်သက်. ရှုပ်ထွေးမဟုတ်
၁.၅ နှစ် - ကျွန်တော် reboot လုပ်ပြီးပြီ။ ဤသည်အံ့သြဖွယ်ထူးဆန်းတဲ့လှပသောနှင့်ကြောက်စရာဖြစ်ပါတယ်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာလိင်မှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သောချိတ်ဆက်မှု - ကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေသည်ပြန်လည်စတင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် OCD ရှိနေတုန်းပဲ။
အဘယ်သို့ငါ HOCD ထံမှပြန်လည်
ငါထူးဆန်းတဲ့မလိုချင်တဲ့ fetishes တွေမရှိတော့ဘူး။
အသက် ၄၂ နှစ် - အိမ်ထောင်သည်၊ Cross-dressing နှင့်အန္တရာယ်ရှိသည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှဖြတ်လိုက်ပါ
နောက်ထပ် HOCD Post ကို။ အကွံဉာဏျ / တုံ့ပြန်ချက်လို။
"ငါသည်ငါ့ HOCD ယဉ်ပါး
str8 မှစ. လိင်တူချစ်သူများနှင့်နောက်ကျောမှ
Fantasy (Shemale) ထဲကသယ်ဆောင်နေဖြင့် Porn စွဲရင်ဆိုင်ရနိုင်ဖို့ကြိုးစားခြင်း
က Short HOCD Recovery ကိုဇာတ်လမ်းများ
အဘယ်သို့ငါ HOCD ဖယ်ရှားပစ်တယ်
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ဒီနေ့ငါအမျိုးသမီးတွေကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်နိုင်တယ်။ ဒါ့အပြင် HOCD ၏လက္ခဏာတွေရှိခဲ့နှင့်ဤလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားကြသည်
တစ်ရက် 80 ကတည်းက ED အခမဲ့ဖြစ်သည်။ HOCD သိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည်။ ယခင် 250 နှစ်များတွင်ထက်ကဤ 24 ရက်အတွင်းပိုမိုလိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွနု်ပ်၏လိင်အင်္ဂါများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှုပ်ထွေးမှုမရှိတော့ပါ။ PMO မှယူဆောင်လာသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်စိတ်ချသောစိတ်ကျဝေဒနာကိုလည်းခံစားခဲ့ရသည်
Sissi ပစ္စည်းပစ္စယရန်, transsexual မှ vanilla စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမှစက်လှေကား - အခုတော့ပိုပြီးပုလ်ခံစား Sissi စိတ်ကူးယဉ်သိသိသာသာချဖြစ်ကြသည်မိန်းကလေးငယ်များငါ့လားပြန်ဖြစ်ကြသည်။
porn-သွေးဆောင် fetishes နှင့် HOCD အပေါ်ဘလော့ဂ်ပို့စ်များ (အစောဆုံးအနေဖြင့်လတ်တလောရန်စာရင်း):
“ အပျော်ကစားကစားခြင်းတွင်အကျင့်ပျက်” နှင့်သူ၏တွေ့မြင် ပြန်လည်နာလန်ထူအစီရင်ခံစာ - လိင်အရသာရှိခြင်းအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးရေးသားချက်။
'' လမျးဖွောငျ့လူတို့, ဂေး Porn 'နှင့်အခြားဦးနှောက်မြေပုံ Mystery - ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုတိယပို့စ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များကိုတိုးချဲ့သည်
"မင်းရဲ့ဂျွန်ဆင်ကိုမင်းယုံနိုင်သလား" - လိင်ဆိုင်ရာအရသာများကိုပြောင်းလဲရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြည့်စုံဆုံးရေးသားချက် (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်ချက်များစွာသည်) ။
ပြန်လည်စဉ်းစား Ogas နှင့် Gaddam ရဲ့ '' တစ်ဦးဘီလီယံဆိုး Thoughts '' - သဘောမတူသောကျွန်ုပ်တို့၏စာမူ တစ်ဦးကဘီလီယံဆိုး Thoughts porn အရသာငြိမ်ဖြစ်ကြောင်းနိဂုံးချုပ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြိုက်ကိုဘောင်ခတ်ပြီးမပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများဖြစ်ပါသလား - Post မှ morphing လိင်အရသာနှင့်သက်ဆိုင်ရာတိရိစ္ဆာန်သုတေသနကိုစူးစမ်းလေ့လာသည်။
HOCD များအတွက် exposure ကုထုံး? Porn နှင့်ပတ်သက်သော HOCD သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကုသမှု protocol ကိုတောင်းဆိုလိမ့်မည် - HOCD များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လတ်တလော post ကိုဆွေးနွေးခြင်းကုထုံး
လေ့လာချက်: 'shemales' ကိုမည်သူဆွဲဆောင်သနည်း။ - gynandromorphophilic အမျိုးသားများကဘယ်သူတွေလဲ။ လိင်အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်မှုကိစ္စပါ ၀ င်သောအမျိုးသားများအားသရုပ်ဖော်ခြင်း
ငါမဟုတ်လိင်တူချစ်သူမဟုတ်ပါ၊ သင်လည်းမပါ ၀ င် - HOCD နှင့်ပတ်သက်သောအမှန်တရား
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးဟာသိသိသာသာဆိုင်ရာ obsessional သံသယများ၏နားလည်မှုနှင့်ကုသမှု, စတီဗင် Phillipson, Ph.D ဘွဲ့ကိုအားဖြင့်
HOCD: လိင်တူဆက်ဆံသူ OCD & လိင် Orientation OCDစတီဗင်ဂျေ Seay, Ph.D ဘွဲ့ကိုအားဖြင့်
လိင်တူချစ်သူ OCD / HOCD / လိင်အရှေ့တိုင်းဆန် OCD: အသုံးများသော Subtype - LA ၏ OCD စင်တာ
ကနေ Schwartz technique ကို ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက်
ကုထုံးပညာရှင် ၂ ယောက်၏ဗွီဒီယိုအတို -“ လိင်တူချစ်သူတွေကိုဂရုစိုက်တာသူ့ကိုဖမ်းမိတယ်။ သူဂေးလား” ကင်းမျှော်စင်အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက် \_ t
Porn စွဲ vs. OCD အပေါ်ဒေါက်တာ Penzel
ဆရာဝန် Penzel HOCD များအတွက် Desensitization လုပ်ငန်းစဉ်ဖော်ပြထားသည်
လိင်တူချစ်သူ OCD / HOCD စမ်းသပ်ခြင်း - LA ၏ OCD စင်တာ
တဦးတည်း porn-သွေးဆောင် fetishes နှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED ဖွံ့ဖြိုးဘယ်လိုဖြေရှင်းကြောင်း YBOP တင်ပြချက်များ
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက် Highspeed အင်တာနက်က Porn (2013) တွေ့ဆုံ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာဗွီဒီယိုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်စေပြီးညစ်ညမ်းသောအရသာကိုရရှိသည်။
Porn on Your Brain - ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှု - porn အမျိုးအစားအသစ်များသို့တိုးပွားလာခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုရှင်းပြသည်
ဂယ်ရီ၏ရေဒီယိုသည် HOCD နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြသသည် -
HOCD: ဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးသနည်း? ဘယ်လိုတဦးတည်း recover သနည်း? (ရေဒီယို show ကို #23) - HOCD မှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည့်လူငယ်တစ် ဦး ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်
ဖြတ်ကျော် Porn Hetero အမျိုးသားများအတွက်များထဲတွင်ကြီးမားလူကြိုက်များသောအဘယျကွောငျ့ - Alternet (၂၀၁၆)
စင်ကြယ်သော OCD: တစ်ရိုင်းစိုင်းနိုးထက The Guardian သတင်းစာ - လူတိုင်းဒီဖတ်သင့်တယ်! အမျိုးသမီးသည် SOCD နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာရုန်းကန်မှုအကြောင်းရေးသားခဲ့သည်။
OCD နှင့်အတူနေထိုင်ခြင်း၏အဆိုပါအိပ်မက်ဆိုးက The Guardian သတင်းစာ - လူတိုင်းလည်းဒီကိုဖတ်သင့်ပါတယ်
ရေချိုးခန်းလိင်ပူအဘယ်ကြောင့် - စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်“ ကြောက်ရွံ့ခြင်း” တို့သည်လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုတိုးပွားစေသည်
'လိင်တူဆက်ဆံသူ OCD' - လိင်တူချစ်သူဟုသံသယရှိသောဖြောင့်မတ်သောအမျိုးသားများ
လိင်တူဆက်ဆံ OCD တစ်ဦးအရာဖြစ်ပြီး, အမေရိကန်လူမျိုးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒါဟာ မှစ. သည်းခံကြ (OUT မဂ္ဂဇင်း)
porn-သွေးဆောင် SOCD နှင့်ဆက်စပ်သောသိပ္ပံ
လိင်တူဆက်ဆံခြင်းတော့ပူပန်: OCD ၏တစ်ဦးကနားလည်မှုလွဲ Form ကို, မော်နီကာ Williams က Ph.D (2008) က
အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များက Google Talk ကိုဘာကြောင့်ကျနော်တို့ (shemale အပါအဝင်) porn အချို့အမျိုးအစားများကိုကြိုက်တယ်
လေ့လာမှုပြုလုပ်တွေ့ OCD ဒီစွဲလမ်း၏ပုံမှန် * ရလဒ် * ဖြစ်ပါသည်
လေ့လာချက်: အထီးလိင်တူဆက်ဆံတဲ့အပြုအမူအပေါ် - အိန္ဒိယသုတေသီများတွေ့ရှိချက်အရအမျိုးသားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကာလအတွင်းရရှိသော STIs ကုသမှုခံယူရသောအမျိုးသားများ၏ ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းသည်လိင်တူချစ်သူများဖြစ်ပုံရသည်။ ကြွင်းသောအရာသည်အခြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။
လေ့လာချက်: စိုးရိမ်စိတ်လိင်စိတ်နိုးထ (1983) တိုးပွါး - စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းသည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုမြင့်မားစေသည်
လေ့လာချက်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလိင်စိတ်နိုးထ: တစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်လှုံ့ဆော်မှုစဉ်အတွင်း arousal ၏နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးလှုံ့ဆော်မှု (1987) - စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်လိင်စိတ်ကိုနှိုးဆွစေသည်
လေ့လာချက်: အမျိုးသားများတွင်နောက်ဆက်တွဲလိင်စိတ်နိုးထ (1980) အပေါ်စိတ်ခံစားမှု arousal ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု - စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်လိင်စိတ်ကိုနှိုးဆွစေသည်
လေ့လာချက်: အီတလီလိင်ကွဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှေ့တိုင်းဆန်-Related obsessive နှင့် compulsive အကဲဖြတ်: အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှေ့တိုင်းဆန် obsessive-compulsive စကေး (2016) ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အတည်ပြုခြင်း။
ကြောက်ရွံ့မှုမှစိတ်လှုပ်ရှားစရာအရင်းအမြစ်ကိုသုတေသနတွေ့ရှိ စိုးရိမ်စိတ် / ကွောကျရှံ့သော dopamine တိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်
နှစ်ဦးစလုံးနည်းလမ်းများပိုးပနျး နှင့် ယစ်မူးယင်ကောင် hypersexual ရ dopamine ကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းသည်အထီးယင်ကောင်များနှင့်ယောက်ျားများကိုပိုးပန်းစေသည်
Enhanced D2-type အမျိုးအစားအဲဒီ receptor လှုပ်ရှားမှုအထီးကြွက် (2012) တွင် conditional လိင်တူချင်းမိတ်ဖက် preference ကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ် dopamine ကိုလိင်မှုကိစ္စတိုးမြှင့်ခြင်း၊
လိင်တူချင်းချစ်သူ - Dopamine agonists များသည်လူနာများ၏သိသိသာသာရာခိုင်နှုန်းကို hypersexuality ဖြစ်စေသည်
Dopamine agonist ရောဂါဗေဒအပြုအမူတွေဖြစ်ပေါ် - dopamine agonists ကြောင့်ဖြစ်ရခြင်း hypersexuality
obsessive compulsive ရောဂါပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုအတွက်လိင်တိမ်းညွတ် obsessive ။ (2011)
မှတ်ချက်: ကျနော်တို့ဆရာဝန်တွေမဟုတ်ဘူးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်တို့သည်ဤအတွေးအခေါ်များ၏ဖြစ်ဖြစ်မကြိုးစားမီဆရာဝန်တစ်ဦးနှင့်အတူဤအချက်အလက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤနေရာတွင် HOCD နှင့်ပြိုင်သူနှစ်ဦးယောက်ျားတွေမှမှတ်ချက်များနေသောခေါင်းစဉ်:
အစွန်းရောက်သို့မဟုတ်စိုးရိမ်စိတ်ထုတ်လုပ်သောပစ္စည်းများအတွက်တဏှာပထမဦးဆုံးမှာပိုမိုဆိုးရွားရနိုင် ယင်းကြောင့် ဆုတ်ခွာ၏ဆိုးကျိုးများ။ ဒီကိုကြည့်ပါ Reddit ချည်.
ငါ ... inositol ကိုစတင်ယူ။ သူက FUCKING အများကြီးကူညီနေပါတယ်။ ဒီဟာကိုရလဒ်ကောင်းစေမယ်မထင်ဘူးလား၊ ဒါပေမယ့်တစ်လကျော်သွားပြီ။ ငါကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောအတွေးတစ်ခုမရှိဘူးရက်ပေါင်းများစွာ, စာသားတစ် fuck ဆိုတဲ့တစ်ခုတည်း။ သငျသညျယောက်ျားတွေထွက်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
ငါဒုတိယ inositol လည်းအလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေဖြည့်စွက် inositol NAC ဆက်စပ်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုလျော့နည်းစေသည့် obsessisions လျော့ကျစေပါတယ်အဖြစ် N ကို Acetyl Cysteine ​​သို့မဟုတ် NAC ထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်။ တရားအားထုတ်ခြင်းနှင့်ကုထုံးနဲ့ပေါင်းစပ်အထူးသဖြင့်အခါ။
ယေဘုယျအားဖြင့် OCD များအတွက်ဖြည့်စွက်အကြံပြုချက်များကို
ငါလိင်တူချစ်သူလှည့်ခဲ့သည်ထင်ခဲ့တယ် ငါ့ရဲ့ HOCD ကအရမ်းအားကောင်းတယ်၊ ငါအနီးဆုံးအထပ်မြင့်ကနေငုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်။ ငါအရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျတယ်။ ငါမိန်းကလေးတွေကိုငါချစ်တယ်၊ ပြီးတော့အခြားလူတစ်ယောက်ကိုငါမချစ်နိုင်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဘာလို့ ED ရှိတာလဲ။ ငါ့ကိုလိင်စိတ်ထကြွစေသောလိင်တူချစ်သူတွေဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ အခုငါဘာကြောင့်ဝေဒနာခံစားရတာလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာပြီဆိုတော့အများကြီးပိုကောင်းလာပြီ။ ငါရည်းစားရှာနေတစ်ချိန်တည်းမှာ reboot လုပ်နေစဉ်။ ၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်းသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုနားလည်ရန်အလွန်စိတ်သက်သာရာရသည်။
nofap စစ်တမ်းတစ်ခုအရ porn အသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏ပင်ကိုသဘာဝနှင့်မကိုက်ညီသော porn အမျိုးအစားများသို့ကူးပြောင်းသွားသည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရသည်။ နီးပါး 60% nofap မဲရုံ ၀ င်ရောက်လာသူများကသူတို့၏အရသာများသည်အလွန်အမင်းတိုးပွားလာခြင်းသို့မဟုတ်ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းများဖြစ်လာသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သူတို့ထဲကထက်ဝက်ခန့်ဟာဒီအပြောင်းအလဲတွေကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရပါတယ်၊ ထို့အပြင်သည့်အခါ သူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုကိုဆိုးရွားလာခဲ့သည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သုတေသီများနောက်ဆုံးတော့ porn အသုံးပြုသူများကိုမေးသော် ယခင်ကသူတို့က“ စိတ်မ ၀ င်စားဘူး၊ တဝက် သူတို့ထဲကကပြောပါတယ်။ နှင့် ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကသုတေသီတွေက အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကပိုပြီးလျှင်မြန်စွာထိန်းချုပ်မှုထက် habituate ငှါ၎င်း, အသစ်အဆန်းကိုပိုမိုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ဖို့ဖြစ်စေသောသရုပ်ပြစတင်ပါပြီ။
ထိုသို့ပေါ်လာသော အကျိုးကို circuitry ၏ desensitization ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆက်ဆံသူများ၏မူလလိင်မှုဆိုင်ရာအရသာနှင့်ကိုက်ညီခြင်းမရှိသောညစ်ညမ်းသောလိင်ဆက်ဆံသူများအားနောက်ကွယ်တွင်ထားရှိသည်။ HOCD သည်လူများအားအမြဲတမ်းသတင်းပို့သောအရာ၏မငြိမ်မသက်ဖြစ်စေသည့်ဗားရှင်းဖြစ်နိုင်သည် - အသစ်ကအမျိုးအစားမှတင်းမာမှုလျှော့ချ။ dopamine နှင့် adrenaline (norepinephrine) အားလုံးသည်ကြောက်ရွံ့မှု၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ဤသည်မှာအတိအကျမသိသော ဦး နှောက်သည်အလိုရှိသည်။ အကယ်၍ သင်၏ ဦး နှောက်သည်လှုံ့ဆော်ရန်အလုံအလောက်ဖြစ်လာလျှင် (သင်အစောပိုင်းအမျိုးအစားများကိုအလွယ်တကူအထွတ်အထိပ်မရောက်နိုင်သောကြောင့်) ဤ visit ည့်သည်ကဲ့သို့သင်ပင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ငါဟာလိင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုကြောက်ဖို့ဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမရဲ့အရောင်တောက်တောက်အမျိုးမျိုးထဲမှာအမျိုးသမီးပုံစံကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်လွန်းတာကြောင့်ပဲ။ ဒါပေမဲ့တခြားယောက်ျားတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ အဲဒီစိတ်ကူးတွေကိုတောင်ငါပြုမူခဲ့တယ်။ အရာသည်ယောက်ျားဖြစ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ဘာမျှမလုပ်ပေးနိုင်သော်လည်း၎င်း၏ "တားမြစ်ထားသော" ရှုထောင့်ကကျွန်ုပ်၏ dopamine - တပ်မက်သောစိတ်ကိုမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုစိတ်ကူးဖြင့်ကစားစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကိုမည်သို့ကြိုးနှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်သည်ကိုနားလည်ရန်အဓိကနိယာမမှာ“ အတူတကွဝါယာကြိုးများကိုအတူတကွလောင်ကျွမ်းစေသောအာရုံခံများ” ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအရာနှစ်ခုသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်၎င်းတို့အားအမှန်တကယ်အာရုံကြောဆက်သွယ်မှုအားဖြင့်သူတို့ကိုဆက်စပ်လေ့ရှိသည်။ ဆက်စပ်ဖြစ်ရပ်များပိုမိုပြင်းထန်လေ (သို့) ၎င်းတို့သည်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်လေလေဝါယာကြိုးအားကောင်းလေလေဖြစ်သည်။ အပြုအမူတစ်ခုသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုအတွက်မြှုပ်နှံထားသည့်အာရုံကြောဆဲလ်အုပ်စုများကိုတစ်ခါတစ်ရံ“ ဦး နှောက်မြေပုံ” ဟုခေါ်သည်။
မျိုးပွားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးဗီဇ၏နံပါတ်တစ် ဦး စားပေးဖြစ်ပြီးလိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းသည်ဘိလပ်မြေမှတ်ဥာဏ်နှင့်သင်ယူမှုကိုအထောက်အကူပြုသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင့်ဆုံး dopamine ထုတ်လုပ်သည်။ အော်ဂဇင်သည်အာရုံကြောဓာတုဗေဒပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ဆက်စပ်ဖြစ်ရပ်များနှင့်အခြေအနေများသို့အလွယ်တကူချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ စိတ်ပညာရှင် Norman Doidge မှရှင်းပြသည် ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက်:
ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်နေသည့်သူတို့၏ကွန်ပျူတာများရှိအမျိုးသားများသည် NIH ၏လှောင်အိမ်အတွင်းရှိကြွက်များနှင့်တူသည်။ dopamine သို့မဟုတ်၎င်းနှင့်တူသောအရာတစ်ခုရရန်ဘားကိုနှိပ်လိုက်သည်။ ဦး နှောက်မြေပုံများပြောင်းလဲခြင်းအတွက်လိုအပ်သောအခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသင်တန်းများသို့သူတို့သွေးဆောင်ခံခဲ့ရသည်။ …သူတို့ဟာလိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုခံစားရပြီးတစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါအော်ဂဇင်တစ်ခုရသည့်အခါ“ dopamine of spritz” ဆုချီးမြှင့်သည့် neurotransmitter ကသင်တန်းများအတွင်း ဦး နှောက်အတွင်းရှိဆက်သွယ်မှုများကိုပိုမိုခိုင်မာစေသည်။ [“ အရသာနှင့်ချစ်ခြင်းများကိုရယူခြင်း” အခန်းမှဖြစ်သည်။ )
မကြာသေးမီတိရိစ္ဆာန်သုတေသန dopamine (က dopamine agonist) ၏မြင့်မားနိုင်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသအတိုင်းဤသက်သက်သာသီအိုရီမဟုတ်ပါဘူး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေးပြောင်းလဲ ယောက်ျား၌တည်၏။ -Norman Doidge သူတို့ရဲ့ပင်ကိုလိင်ကိုက်ညီမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာတီထွင်ခဲ့သူအများအပြားယောက်ျားအကြံပေး:
အဆိုပါ web site များဟာသူတို့ရဲ့အသိပညာမပါဘဲ၎င်းတို့၏ဦးနှောက်ပြောင်းလဲကြောင်း themes များနှင့် script များမိတ်ဆက်အဖြစ် [လူနာ] စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တွေ့ရှိခဲ့သောအရာကိုများ၏ content ပြောင်းလဲသွားတယ်။ plasticity ယှဉ်ပြိုင်သောကွောငျ့, အသစ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပုံရိပ်တွေများအတွက်ဦးနှောက်မြေပုံများအားယခင်ကသူတို့ကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သောအရာ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ (p.109)
တစ်နည်းပြောရလျှင်ယောက်ျားများစွာသည်လိင်မှုကိစ္စ၌လိင်မှုကိစ္စပြောင်းလဲမှုကိုတွေ့ကြုံခံစားနေရပုံရသည်။ အဲဒါအံ့သြစရာလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများသည်သုက်ပိုးလိင်တံ၏ရုပ်ပုံများကိုနာရီပေါင်းများစွာမတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါ။
သို့သော် HOCD သည်အသစ်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းထက်သင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့်မကိုက်ညီသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းထက်မကပါ။ ယင်းအစား၎င်းသည်အသက်ရှင်သောငရဲဖြစ်နိုင်သည့်အသိအမှတ်ပြုရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ မှ စင်ကြယ်သော OCD: တစ်ရိုင်းစိုင်းနိုးထက The Guardian သတင်းစာ, SOCD နှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆောင်းပါး:
obsessive-compulsive disorder (ဘ ၀ ကိုလိင်တူဆက်ဆံသူ OCD (HOCD)) ဟုလည်းခေါ်သည်။ လိင်တူချစ်သူဖြစ်ခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းခြင်းအဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ သူ့ကိုယ်သူဖြောင့်မှန်သည်ဟုယုံကြည်သူသည်များသောအားဖြင့်ထိုလိင်မှုကိစ္စကိုသံသယဝင်ကာလိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုစတင်ကျင့်သုံးလိမ့်မည်။
ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်ဆွယ်နေသောလူများ 'HOCD' မှတဆင့်သူတို့လိင်တူချစ်သူများသည်“ ချို့တဲ့မှု” ထက်နည်းပါးလွန်းသည်။ သူတို့ကလုံးဝနီးပါးမရှိ။ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကို“ ပြောင်းလဲ” သူအများစုသည်သူတို့၏စွဲလမ်းမှုသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လိင်မှုဆိုင်ရာမဟုတ်ဘဲလိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိသည့်အခြားကြောက်ရွံ့မှုများနှင့်စိုးရိမ်မှုများအကြောင်းနားလည်လာသည်နှင့်အမျှလိင်တူဆက်ဆံခြင်းသို့ကူးပြောင်းသူအများစုသည်ယာယီသာပြုလုပ်ကြပါသည်။
ရှိပါတယ်သော်လည်းကြောင့်ဖြစ်ပုံရသည် HOCD နှစ်မျိုး:
သို့သျောလညျးယနေ့ HOCD အဘို့အထွန်းသစ်စတွန်းအားနေ့စဉ်အပျော်အပါးမှ ဦး နှောက်ကိုတုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းခြင်းနှင့်ထို့ကြောင့်အာရုံခံစားမှုများအတွက်အပူတပြင်းသောအရာ, နာတာရှည် overstimulation ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ HOCD ကိုမဖွံ့ဖြိုးသောညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအားလည်းဤအဖြစ်မျိုးကြုံတွေ့နေရသည်။ ကြည့်ပါ ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်လိင် / လိင်စွဲခြင်းတို့ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုများ၊ နှိုးဆွမှုနည်းခြင်း၊
အွန်လိုင်းမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းကတာရှည်သုံးစွဲခြင်းကိုလွယ်ကူစေသည်။ အတိတ်၏ erotica နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ဒါလှုံ့ဆော် အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်အတွက်ကြောင့်ထုတ်လုပ်ကြောင်း စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ မရပ်မနားလိင်မှုကိစ္စတားဆီးနှောက်ယှက်ခြင်း မှလွဲ၍ ယနေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းခြင်း (ဝါယာကြိုး) ကိုတိုးပွားစေပြီးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင်အဓိကလှုံ့ဆော်မှုအားလုံးအတွက် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်စနစ်ကိုအသက်ဝင်စေသည်။
တခုခု မျှော်လင့်ချက်များကို ချိုးဖောက်ခြင်း - တုန်လှုပ်ခြင်း၊ အံ့အားသင့်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်မှန်းထားသည်ထက် ပိုပါသည်။
အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူသူလုပ်နိုင်ကွောငျးတှေ့နိုငျသ သာ မိမိအနောက်ဆုံးပေါ် (နှင့်ထို့ကြောင့်အများဆုံးလှုံ့ဆော်) အမျိုးအစားမှအထွတ်အထိပ်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သူသည်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့်မကိုက်ညီဟုသူယူဆလျှင်၎င်းသည်အလွန်တုန်လှုပ်စေသောတန်ဖိုးသည် ပို၍ ကြီးသည်။ ထို့ထက် ပို၍ လှုံ့ဆော်မှု / စိုးရိမ်မှုဖြစ်စေသည့်အာရုံကြောဓာတုပစ္စည်းများကိုထုတ်လွှတ်သည်။ သူ၏နှိုးဆွမှုသည်သူ၏စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ပိုမိုများပြားလာသည်။ ဒီလူတွေကသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုဖော်ပြတယ်။
ပထမဦးဆုံးအကောင်လေး: ကြောက်စရာကောင်းတာကငါဟာအမျိုးသမီးတွေကိုအရူးအမူးစွဲလမ်းစေတဲ့ယောက်ျားတွေ၊ ယောက်ျားတွေဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားတွေရဲ့စိတ်ကူးကိုမြင်နေတာပါ။ အထက်တန်းကျောင်းကတည်းကအခြားယောက်ျားများနှင့်သာသီးသန့်ဆက်ဆံခဲ့သောဂေးအမျိုးသားတစ်ယောက်အနေနှင့်၎င်းသည်ထူးဆန်းသည်။ “ ရုပ်ဆိုးသော” အမျိုးသမီးများလမ်းပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရလျှင်ပင်သူတို့နှင့်အတူအရူးအမူးလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်မမြင်နိုင်ပါ။ ဒါရပ်လိုက်မလား? ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါသလား
ဒုတိယအကောင်လေး: ပထမ ၂ ရက်မှာကျွန်မဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများစွာနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေချင်နေခဲ့တာ၊ ဒီအတွေးတွေကြောင့်ငါ့ကိုဂေးလို့ထင်စေတယ်၊ ​​ငါဘာလုပ်သလဲ၊ ငါဘာပြောလဲ၊ ကျွန်တော်မစားနိုင်ဘူး ငါဟာကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောအတွေးများကိုတွေးမိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်တူချစ်သူကဲ့သို့ခံစားမိစေရန်၊
အသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားခြင်းရှိ၊ မရှိကိုနားလည်ရန်မပြတ်တမ်း၊ မပြတ်တမ်း“ စမ်းသပ်ခြင်း” နှင့်အခြားစိတ်ချရသောရိုးရာဓလေ့များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အခြားသောညစ်ညမ်းသည့် OCD (ညစ်ညမ်းမှုနှင့်မသက်ဆိုင်သည့် HOCD အပါအ ၀ င်) ကဲ့သို့ပင်စမ်းသပ်မှုနှင့်ရှာဖွေမှုများသည်ယာယီသက်သာရာရစေသည်။ “ စမ်းသပ်မှု” တစ်ခုစီသည်မအောင်မြင်သောနှိုးဆွမှုကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်စမ်းသပ်မှုများသည်ပြproblemနာကိုအစပျိုးစေသည်.
ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအကြိုးအသံမပြုစေခြင်းငှါပေမယ့် ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အကျိုးကို circuitry မြှင့်လုပ်ဆောင် နှင့် စိုးရိမ်စိတ်လိင်နှိုးဆွနိုင်ပါတယ်။ roller Coaster နှင့်ထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်စဉ်းစားပါ။ (ကြောင့်နာတာရှည် overstimulation / စွဲလမ်းနေဖြင့်ပေါ်ယူဆောင်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများမှ) အာရုံခံစားမှုအဘို့အပူတပြင်းတစ်ဦးနှောက်စေရန်, ကွောကျမကျသွေးဆောင် activation အဖြစ်အထူးသဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုမှတ်ပုံတင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံး dopamine နဲ့ norepinephrine (adrenaline တစ်ပုံစံ) ထ jacks ။ ဖော်ပြထားတယောက် porn အပေါ်ချိတ်ဆက်တဦးတည်းကောင်လေးအဖြစ်:
ငါအခုလိင်တူချစ်သူ porn ကိုပြန်သွားပြီငါ shemale porn တော့ဘူးတကယ်တကယ်ပထမဦးဆုံးမှာနှိုးဆွသော, ဒါပေမယ့်လက်ဖက်ရည်မယ့်ကိုကိုငါ့ခွက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါကလူထင်လိမ့်မယ်အရာကိုကြောက်လန့်ဖြစ်ခြင်းရပ်တန့်ပြီးတာနဲ့သူကအလုအယက်ငါ့ကိုပေးပျင်းစရာဖြစ်လာခဲ့သည်ကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
shemale porn ကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ရှိခဲ့တာကအသစ်ဖြစ်ပြီးစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အခုတော့မိန်းမလိုပဲ။ ကြောက်ရွံ့မှုကကျွန်မကို shemales ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်ကြောက်ရွံ့မှုပျောက်ကွယ်သွားတာနဲ့အမျှဆွဲဆောင်မှုဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒစ်နဲ့အတူအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့တာဟာမမှန်ပါဘူး။ ဒါဟာစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်မဟုတ်ပေမယ့်မဖြောင့်ပါ
အခြေအနေသည် ဦး နှောက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်လူတစ် ဦး ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်စေမှုက BDSM နှင့်ဆင်တူသည်။ HOCD ဝေဒနာသည်များတွင်နိုးကြားမှုနှင့်ထိတ်လန့်မှုသည်လည်းအလားတူအဆုံးသို့ရောက်ရှိသည်။ အဓိကအချက် - ပြင်းထန်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်မပြေမှုများရှိသော်လည်းမြင့်မားသောနှိုးဆွမှုသည်အပြုအမူကိုရပ်တန့်ရန်အလွန်ခက်ခဲစေနိုင်သည် (စွဲလမ်းစေနိုင်သည်) ။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်စိုးရိမ်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် ခံစားချက်များကို ဆွဘို့အအပူတပြင်းတစ်ဦးနှောက်ထဲမှာ arousal လိုပဲ။
ငါ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်ကျွန်ုပ်နှင့်စကားပြောနေသူကို“ နက်ရှိုင်းသောခံစားချက်များ” အဖြစ်လွဲမှားစွာအနက်ဖွင့်သည်။
HOCD ဝေဒနာသည်၏ ဦး နှောက်သည်ဆင်းရဲဒုက္ခမှသူ၏အကျိုးကျေးဇူးအချို့ကိုရရှိရန်သင်ယူခဲ့သည်။ ပိုဆိုးသည်မှာ၊ ဝေဒနာသည်သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ရန်ကြိုးစားသောအခါသူ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုမှာကာလရှည်ကြာစွာတိုးပွားလာလိမ့်မည်။ ဆုတ်ခွာအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပေါ်စေသည် အားလုံး ဆေးစွဲသူများပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၊ HOCD ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ မှလွဲ၍ အခြားသူများကိုပိုမိုနှိုးဆွမှုအတွက်တွန်းအားပေးခြင်း။ နောက်ဆုံးတွင်အများစုသည်“ စစ်ဆေးခြင်း” သည်အမှန်ပင်ပြissueနာဖြစ်သည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။
ငါနေ့တိုင်း Google HOCD ကိုသွားလေ့ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကအရမ်းစိတ်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ လိင်တူမေထုန်၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုမကြည့်ပါနှင့်သို့မဟုတ်သင်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ဖတ်ရှုသည့်အရာများကိုမယုံပါနှင့်။ မင်းမလုပ်သင့်တာမှန်သမျှကိုငါစာသားအတိုင်းလုပ်ခဲ့တယ် အချိန်တန်သော်သင်ထွက်လာသည့်ပုံပြင်များကိုဖတ်နိုင်ပြီးသင်ဘယ်တော့မျှထိုသို့မဖြစ်ခဲ့ကြောင်းနားလည်လာလိမ့်မည်။ သင်သော်လည်းမရှိသေးပါ။ ငါရောက်နေတာ ၆ လရှိပြီ။ ဟုတ်တယ်၊ ကျော်ဖို့အတွက်တကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့အချိန်လိုတယ်၊ မင်းကိုငါလိမ်မှာမဟုတ်ဘူး။
HOCD ဝေဒနာသည်များအတွက်ဤကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည့်စိုးရိမ်စိတ်များကပြင်းထန်သော spikes များ (တိမ်းညွတ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှု) နှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးသော“ စစ်ဆေးခြင်း” တို့ကိုမကြာခဏစွဲလမ်းစေပြန်သည်။ အမှန်မှာအချို့ကသူတို့၏ HOCD ကြောက်ရွံ့မှုသည်အသေးအဖွဲဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည် သူတို့ porn ဖြတ်သည်တိုင်အောင်, နှင့်များ၏ဆက်ပြောသည်စိုးရိမ်ပူပန် porn ဆုတ်ခွာ သူတို့ကိုနှိပ်ပါ။ စွဲနေတဲ့ ဦး နှောက်ဟာအပြင်းထန်ဆုံး "ပြင်ဆင်မှု" ကိုပစ်မှတ်ထားတာနဲ့အမျှစဉ်းစားလို့ရပါတယ် - ထိတ်လန့်ခြင်း + စစ်ဆေးခြင်း + HOCD-related လှုံ့ဆော်မှုများကိုလိင်စိတ်နှိုးဆွခြင်း၊
မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, sensitized ဦးနှောက်လမ်းကြောင်း ပြင်းထန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအဘို့လျော့နည်းလှုံ့ဆော်တွေကို (ပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသူတွေကို) မှကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ကျနော်တို့ဆွေမျိုးလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူအဆုံးစွန်သော unwire, ဒါပေမယ့်ယခင်လို့မရပါဘူး။ တို့ကပြန်ပြောပြအဖြစ်ဤသုတေသနလုပ်ငန်းအတွက်သရုပ်ပြခဲ့ပြီး ဂျိမ်း G. အ Pfaus et al:
porn စွဲပစ္စုပ္ပန်အခါ exposure ကုထုံးရလဒ်များကိုစေခြင်းငှါ
ဒါကြောင့် porn-based ထိတွေ့မှုကုထုံးသည် porn-related HOCD ကိုဖော်ထုတ်ရန်ကြိုးစားသောလူများအတွက်မှားယွင်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သူမအရက်ကိုငြီးငွေ့မည်ဟူသောသီအိုရီကို ပို၍ သောက်သုံးခြင်းနှင့်တူသည်။ တစ် ဦး စွဲ၌, ဆက်လက်အသုံးပြုမှုကိုသာ ဦး နှောက်ထဲမှာစွဲ Ruts ပိုမိုနက်ရှိုင်း။ ထို့ကြောင့် Exposure ကုထုံးသည်ညစ်ညမ်းသော HOCD ဝေဒနာရှင်အားအသုံးဝင်သောအေးစက် (လေ့ကျင့်ခန်းများ) ကိုမြှင့်တင်မည့်အစားအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသောရောထွေးသောမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုပေးပို့နိုင်သည်။
အမူအကျင့် - စွဲအာရုံကြောလမ်းကြောင်း။ ဤသည်သည်ဖမ်းဆီးရမိခြင်း ၂၂။ စွဲလမ်းသူ (နှင့်သူ၏ကုထုံးပညာရှင်) သည်သူ၏ပြcနာရှိသောပြpersနာများကိုသူ၏ဇွဲရှိရှိအစွမ်းထက်သောတုန့်ပြန်မှုသည် HOCD မဟုတ်ဟုမှားယွင်းစွာကောက်ချက်ချလိမ့်မည်။ သို့သော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုသည်ထူးဆန်းစွာပြောင်းလဲသွားသည်ဟူသောအထောက်အထားဖြစ်သည်။
စိတ်အေးလက်အေးချစ်ခင်ဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်ပထမတော့ယောက်ျားတွေ, မိတ်ဖက်ဖို့ပုံမှန်အားတုန့်ပြန်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ soothing (က oxytocin ဖြန့်ချိဖြစ်ကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့) ။ အဆိုပါစွဲဆုတ်ခွာ၏အဆိုးဆုံးလွန်ပြီသည်အထိဒါ့အပြင်သူတို့မှာလည်းမကြာခဏပိုပြီးမချိမဆံ့ HOCD spikes ခံစားရသည်။ ထုတ်လုပ်အဆိုပါစိုးရိမ်ပူပန်မှု ဆုတ်ခွာ သို့မဟုတ်အခြားစိတ်ဖိစီးမှုများသည်သင့်အားစိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေသည့်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုယ်သင်“ စမ်းသပ်” ရန်တွန်းအားဖြစ်နိုင်သည်။ စမ်းသပ်ခြင်းကဒီအခြေအနေကိုသာအားဖြည့်ပေးတယ်။
ရည်မှန်းချက်မှာကယ်ဆယ်ရေးရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်အဆင်မပြေမှုကိုရှောင်ရှားရန်မဟုတ်ဘဲပြtheနာများအစားဆက်စပ်မှုမရှိသော ဦး နှောက်လမ်းကြောင်းများကိုဖွင့်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ ဦး နှောက်သည်ယခင်“ ဆုလာဘ်များ” မှပြတ်တောက်သွားပြီးစိုးရိမ်ဖွယ်ရာအားအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ စိတ်မသက်မသာဖြစ်သောအတွေးများကိုလက်ခံခြင်းသည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုမတုံ့ပြန်ဘဲလက်ခံခြင်းသည်များစွာအထောက်အကူပြုသည်။ တစ်ခုပြောခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်အတွက်ကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်မလိုချင်သောအတွေးရှိခြင်းကိုလုံးဝလက်ခံရန်ဖြစ်သည်။ အနားယူရန်နှင့်အတွေးကိုလျစ်လျူရှုရန်ကျွန်ုပ်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားသည်။ အလုပ်တစ်ခုကိုသာအာရုံစိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိနေသည့်အချိန်တွင်အသက်ရှူခြင်းနှင့်အသက်ရှင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အခြားအရာတစ်ခုကိုအတင်းအကျပ်အာရုံစိုက်ရန်ကြိုးစားလျှင်မည်သည့်အခါမျှအလုပ်မလုပ်ပါ။ စိတ်အေးအေးထားပါ၊ အတွေးရှိကြောင်းသဘောပေါက်ပြီးသင်၏အလုပ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါ။ နောက်ဆုံးတော့အတွေးကိုငါမစဉ်းစားခဲ့ဘူး၊ ငါ့အလုပ်ကိုလုံးလုံးအာရုံစိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးတော့ငါသဘောပေါက်လာတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အတွေးကဒီနေရာမှာပြန်လာပြီ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမှာအဲဒီလိုရှိခဲ့တာသတိရလို့ပါ။
နောက်ထပ်လုပ်ရမယ့်အရာက "ကောင်းသောအလုပ်" လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောပြီးအပေါ်ကိုထပ်လုပ်ပါ။ Refocus ။ ပြန်လာပြီ တန်ဖိုး။ ဒေါက်တာ Schwartz ရဲ့ OCD ပစ္စည်းတွင်ဖုံးလွှမ်းအဖြစ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးသည်အထိအလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်အမှန်တကယ်အနည်းငယ်ဆိတူသောကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုမူဆက်ဆံဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အခါတိုင်း, သင်သည်အဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ပဲရှည်လျားသည်အတွေးကိုမေ့လျော့ဂုဏ်ပြုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ကျောအပေါ်ကိုယ့်ကိုကိုယ် Pat ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ခန္ဓာကိုယ်ဆီသို့ကိုယ်ပိုင်ဆီသို့အကြမ်းဖက်မှု, အပြင်အကြမ်းဖက်မှုများနှင့်အပြန်အလှန်ဖြစ်လာသည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်အတူလူနာကောင်းတဲ့ရှိကြလော့။ သငျသညျရှိခြင်းနေသောအတွေးလုံးဝသငျသညျအထဲက freaks လျှင်ပင်အပန်းဖြေဖို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်အတင်း။ သငျသညျရှိခြင်းနေကြသည်ထင်မည်သို့ပင်ထိုသို့ပြုမှမဟုတ်ပါဘူးအလိုတော်အတိုင်းအရေးမပါ!
အကယ်၍ သင်သည်“ စမ်းသပ်မှု” အသစ်သည်သင့်ကိုပိုမိုစိတ်ပူစေသည့်ပုံစံတစ်ခုသို့ကျရောက်သွားပါကသင့် ဦး နှောက်သည်သင်၏ကြောက်ရွံ့မှုကိုလိင်ဆိုင်ရာပြueနာအဖြစ်အသုံးပြုနေသည်။ ဤကိစ္စတွင်သင် OCD ကိုကျော်လွှားသည့် Schwartz နည်းလမ်းကိုအသုံးဝင်ဆုံးနည်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ HOCD ဝေဒနာသည်တစ် ဦး က
ငါလုပ်ပြီးပြီ ထိတွေ့မှုကုထုံး ငါ၏အ HOCD အဘို့နှင့်ငါလက်ရှိတွင်သုံးပြီးငါ Schwartz နည်းလမ်း။ စိတ်စွဲလမ်းမှုများနှင့်အနိုင်ကျင့်မှုများအားနည်းနေချိန်တွင်ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်သည်ထိတွေ့ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ HOCD ပြissuesနာများသည်လူတစ် ဦး ၏နောက်ကွယ်၌မေးခွန်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
Schwartz ၏နည်းလမ်းသည်ကျွန်ုပ်၏အမြင်တွင် HOCD ၏နောက်ကျသောအဆင့်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အတွက်ပိုမိုသင့်တော်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုစိတ်ချမှုမရှိစေရန်လှည့်စားခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းများကိုအောင်နိုင်ရန်အတွက်စည်းကမ်းချက်လိုအပ်သည်။ Schwartz ချဉ်းကပ်နည်းသည်စတင်ရန်အလွန်ခက်ခဲသောနည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်လူတစ် ဦး သည် obsessing ကိုရပ်တန့်ရန်အောင်မြင်သောအခါတစ်နေ့တာကိုစိတ်စွဲလမ်းမှုမရှိဘဲဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည့်အတွက်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။
ယခု Schwartz ၏နည်းစနစ်ကိုစတင်အသုံးပြုရန်အတွက်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။ မတူညီသောလှုပ်ရှားမှု / အတွေးအမြင် / အမြင်အာရုံကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲရမည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတစ် ဦး ကကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွေးတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတာကစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါထွက်ပြေးလာတဲ့ရထားတစ်စင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သွားကြကုန်အံ့! တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရလျှင်ထိုသူသည်မိမိအတွက်ဆုလာဘ်စနစ်အသစ်ကိုရှာဖွေရန်လိုသည်။ ငါစိတ်ထဲမှာလျစ်လျူရှုသမျှကာလပတ်လုံးငါဆုဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဖယ်ရှားပစ်နေတယ်။
ငါ၏အစိုးရိမ်စိတ်လွှမ်းခြုံနှင့်လှညျ့စားသည်အဘယ်မှာရှိဤပြင်းထန်သောအဆင့်မှာ Exposure ကုထုံး, အချည်းနှီးဖြစ်၏။ ငါ့ OCD ကိုသာကျွေးသည်။ Exposure ကုထုံးသည်လူတစ် ဦး သည်ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်မညီသောအတွေးအခေါ်ကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့်သူတို့၏ကြောက်ရွံ့မှုများသည်အဓိပ်ပါယျမရှိကွောငျးသိရှိရနျအကောငျးဆုံးဖွစျ၏။ ဆင်ခြင်တုံတရားကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုလှည့်စားခြင်းဖြင့်အစားထိုးဖြစ်လာတဲ့အခါ, IMO ထိတွေ့ကုထုံး OCD feeds ။ ကိုယ့်အမြင်။
အတန်းအလယ်တွင်နှုတ်ခမ်းကိုက်နည်းသည်အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိသည်။ ငါဒီနေ့မနက်မှာလိင်တူချစ်သူအတွေးမရှိဘူး ဒါပေမယ့်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်စိတ်မ ၀ င်စားပါဘူး၊ ဒီအလေ့အကျင့်ကိုအပြည့်အဝပျောက်ကွယ်သွားဖို့အချိန်ယူရ ဦး မယ်။ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့ငါအဲဒီမှာရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာရှိတယ်။ လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့လိင်တူချစ်သူတွေအတွက်စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။
လက်ခံရရှိ Porn အပေါ်အတှေး
လိင်တူချင်းချစ်သောယောက်ျားသည်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ဒီမှာကကောက်နုတ်ချက်ပါ porn အရသာအပေါ်တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကစာအုပ်အကြောင်းပြောနေတာဆောင်းပါး:
စာရေးဆရာများက“ အကယ်၍ Alexa Alexa အရွယ်ရောက်ပြီးသူစာရင်းတွင်ပါသောဆိုက်များကိုအမည်များဖြင့်ခွဲခြားထားပါက T-မိန်းကလေးဆိုက်များသည်စတုတ္ထမြောက်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူဝက်ဘ်ဆိုက်အမျိုးအစား။ ” ထို့အပြင် 'shemales' သည်တတိယမြောက်လူကြိုက်အများဆုံးလိင်ဆိုင်ရာရှာဖွေမှုဖြစ်ပြီး 'Butt' '' threesomes 'နှင့်' interracial sex 'ထက်လူကြိုက်အများဆုံး Dogpile ကိုရှာဖွေသည်။ ” ထို့ကြောင့်မည်သူရှာဖွေနေသနည်း။ Ogas နှင့် Gaddam တို့သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ porn sites များစွာ၏ operator ဖြစ်သော Housekeeper ကိုကိုးကားထားသည်။
"ကျနော့်ရဲ့အဓိကပရိတ်သတ်တွေနဲ့လိင်တူချင်းချစ်သူအများစုဟာပရိသတ်တွေပဲ။ ဒါကအမြဲတမ်းဖွင့်ပုံကိုပါပဲ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုဒ်များသို့လာရောက်လည်ပတ်သူအားလုံးသည်တည့်မတ်မှန်ကန်သည်ဟုငါပြောလိမ့်မည်။
ဒါ့အပြင်တွေ့မြင် "တစ်ဦးကဘီလီယံဆိုး Thoughts" နောက်ကွယ်မှထူးဆန်းတဲ့သစ်ကိုသိပ္ပံ.
ဒါဆိုလိင်ဆိုင်ရာလိင်မှုကိစ္စကိုဘယ်ကနေလာတာလဲ။ လိင်တူချစ်သူယောက်ျားတွေယေဘုယျအားဖြင့်မြင်ချင်ကြဘူး လိင်ကွဲပြားမှုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုမဟုတ်ပါ။ ၎င်းကိုသဘာဝတွင်မတွေ့ရှိနိုင်ပါ၊ ထို့ကြောင့်လူသားများက၎င်းကိုမြင်တွေ့လိုသည်အထိမဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါ။ porn site ထုတ်လုပ်သူများကနည်းဗျူဟာအရကိုင်တွယ်ခြင်းမခံရပါကအသုံးပြုသူအများစုသည်ရှာဖွေခြင်းကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လိင်မှုကိစ္စသည်လိင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပေါင်းစပ်။ မရနိုင်သောအစွမ်းထက်သည့်လိင်ဆိုင်ရာကိစ္စများကိုပေါင်းစပ်ရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်၏ခြေလက်အင်္ဂါစနစ်ဆီသို့ပြင်းထန်သောသတင်းစကားဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုသူများ၏အကြိုက်ဆုံးလိင်အင်္ဂါများဖြစ်သောရင်သား၊ လိင်တံကိုစိုက်ထူခြင်း၊ လိင်တံသုတ်ခြင်း၊ BJ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းစသည်တို့ကိုအမြင်အာရုံတစ်ခုဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ဆင်ခြင်တုံတရားမရ၊ ထိုကဲ့သို့သောအရာများကိုမသိသော limbic ဦး နှောက်သည်သဘာဝတွင်မတည်ရှိပါ။ အိုအိုး လိင်မှုနှိုးဆွမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးအချက်များ! ဒါအပို HOT ပဲ! " ဒါ့အပြင်လိင်တူချစ်သူလိင်တူချင်းချစ်တဲ့လိင်တူချစ်သူတွေအတွက်လိင်တူချင်းချစ်တဲ့လိင်တူချစ်သူအတွက်လိင်တူချင်းချစ်တဲ့လိင်တူချစ်သူတွေကိုလိင်တူချင်းချစ်တဲ့သူတွေကိုလိင်တူဆက်ဆံသူတွေအပေါ်မုဒိမ်းကျင့်တဲ့လိင်တူချစ်သူတွေအတွက်လိင်တူချစ်သူတွေအတွက်လိင်တူချင်းချစ်တဲ့လိင်တူချစ်သူတွေအတွက်လိင်တူချင်းချစ်တဲ့လိင်တူချစ်သူတွေအတွက်လိင်တူချင်းချစ်တဲ့လိင်တူချစ်သူတွေကိုလိင်တူချင်းချစ်တဲ့သူ၊ ထို့အပြင် * cha-ching! * ညစ်ညမ်းသူများသည်သင်၏လည်ပတ်မှုများမှကြော်ငြာဝင်ငွေကိုအိတ်ကပ်ထဲထည့်သည်။
ရဲရင့်ခြင်း၊ ၀ တ္ထုအတွေ့အကြုံများသည်သင်၏စိတ်ကို“ စွဲ” စေပြီးနောက်ပိုင်းတွင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအာရုံကြောဓာတုပစ္စည်း“ DO IT!” ကို ဆက်လက်၍ ပစ်ခတ်သွားခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ မက်ဆေ့ခ်ျများအထူးသဖြင့်သင်စိတ်ကျေနပ်မှုတုန့်ပြန်မှုသည်တန်းတူအောက် (ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်) ။ တကယ့်သော့ချက်ကဒီအတွေ့အကြုံကတကယ်ကိုကျေနပ်မှုရှိ၊
porn နှင့်အတူငါ shemales အဓိကစွဲဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒီလိုစိတ်ကူးယဉ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွဲလန်းနှစ်သက်သည့်အခါကျွန်တော့်လိင်အကြောင်းကိုအလေးအနက်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုစေ၏။ ကောင်းပြီ, ကိုယ့်ကိုမြင်ရဖို့တစျခု shemale အစောင့်အကြပ်ကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ငါ့အရာမဟုတ်! ငါသူမနှင့်တွေ့ပြီးစကားပြောမိသည်အထိမိနစ်အနည်းငယ်ကျော်ခဲ့ပြီးညနေခင်းယဉ်ကျေးစွာအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ပူဖောင်းပေါက်ကွဲမှုအကြောင်း LOL ။ ဒီတော့ဒီအပိုင်းကိုအခြေချထားတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ဖောက်ပြန်မှုသည်ပိုဆိုးလာသည်။ ပထမတွင်ကျွန်ုပ်သည် vanilla သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ သို့သော်မကြာမီကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၀ ကျော်သောကာလများတွင်မလုံလောက်တော့ပါ၊ အစွန်းရောက်ဝတ်ရည်များ၊ hentai များ၊ အနှောင်အဖွဲ့၊ peeing၊ shemales၊ စိတ်ထိန်းချုပ်မှု၊ ကျွန်တော့်ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲဖို့ထက်ဘဝမှာတခြားဆန္ဒမရှိတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့အမျိုးသမီးမိန်းမတစ်ထောင်ကိုလိုချင်တယ်လို့စိတ်ကူးယဉ်ထားတာ။ နောက်ဆုံးတော့ငါစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောမိန်းမတစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးယောက်ျားရဲ့လိင်တံကိုအပျော်တမ်းယူဆောင်လာတဲ့သူတစ်ယောက်အဖြစ်မြင်ခဲ့တယ်။ ငါလည်းလိုချင်သလိုခံစားရတယ်၊ ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့အတူနေရတာကိုစိတ်ကူးခဲ့တယ်။ အသက် ၂၉ - nofap မစတင်ခင်မှာကျွန်မဟာလိင်တူချင်းချစ်သူတွေလို့မထင်တော့ဘူး၊
အောက်မှာတစ်ဦးကို TV ထုတ်လုပ်သူများကတစ်ဦးကမှတ်ချက် အဆိုပါဦးနှောက်တွင်ဗြိတိန်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် Porn ၏ဤသုံးသပ်ချက်ကို
Stuart Bull - ၂၀၁၃ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၁ ရက်
လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကကျွန်မထုတ်လွှင့်ဘယ်တော့မှမယ့်အစီအစဉ်အတွက်အင်တာနက်ပေါ်ကညစ်ညမ်းပတျဝနျးကငျြကိစ္စရပ်များအများအပြားသို့ကြည့်ရှုသူကို TV ကသုတေသီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အဓိကထုတ်လုပ်သူ (ပရိုဂရမျ၏နောက်ကျောအရိုးဖြစ်လို့ယူဆတယ်ခဲ့သော) ပါဝင်ပတ်သက်သိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထားအလုံအလောက်ခိုင်မာတဲ့မဟုတ်ခဲ့ခံစားရတယ်။
ငါ porn နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများနှင့်အတူလူအတော်များများနှင့်အတူစကားပြောသုတေသနစဉ်အတွင်းစာသား Anti-porn sites များပေါ်တွင်လူတို့သညျမှမှတ်ချက်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကိုဖတ်ခြင်းနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့စကားပြောခဲ့သည်။ သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနအများကြီးင်း၏နို့စို့အရွယ်ဆဲဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်း၏အချိန်ကြာမြင့်စွာကြည့်ရှုအချို့သောလူကြီးများနှင့်ကလေးများအပေါ်တစ်ဦးအလေးအနက်ထားအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်သောငါ၏စိတ်တွင်အဘယ်သူမျှမသံသယရှိပါတယ်။
ငါတွေ့ခဲ့သမျှသောအရာမှာပုံမှန် porn (ထိုကဲ့သို့သောအရာရှိလျှင်) ကိုပုံမှန်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်၎င်းတို့သည်ပုံမှန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမရှုမမှတ်ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှအစွန်းရောက်ပုံရိပ်များသို့စတင်ပြောင်းလဲလာသည့်အရွယ်ရောက်ပြီးဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသားများဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ် 'ပြင်ဆင်ချက်ကိုရှာသည်။
မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဿုံပုံမှန်လူသားသူတို့သာ porn တစ်ခုစိုက်ထူရနိုင်တယ်လို့စိုးရိမ်ခဲ့ကြသည်သလိုပဲ, မရှိတော့မှဒါ desensitised ဖြစ်လာခဲ့တဲ့လိင်ကွဲယောက်ျား, porn အဖြစ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူတစ်ဦးသင့်လျော်သောဆက်ဆံရေးမျိုးဖွဲ့စည်းရန်ဖို့တိုက်တွန်းနေတဲ့အစားထိုးဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းခံစားခဲ့ရသူတွေကို လိင်ကွဲ porn သူတို့ကိုယ်တိုင်လိင်တူဆက်ဆံသူ porn, သူတို့ကတော်တော်လေးသို့မဟုတ်ချစ်စရာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့ sexy မှုန်ဝါးမှစတင်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ကိုတွေ့သောအရာကိုအကြားကြောင့်လိုင်းကလေးမြားအတှကျသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသောလူတို့၏ကြည့်ရှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဤလူများ၏ 99% အရွယ်ရောက်ပြီးသူတို့ကြိုတင်မိမိတို့၏ပြဿနာများကိုတစ်ဦးသင့်လျော်သောလိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးဖွဲ့စည်းရန်အချိန်ရှိခဲ့လေသည်။ ဤသည်အဖြစ်တဦးတည်းအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုသူတို့ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပုံရိပ်တွေလုံးဝမေ့လျော့မရနိုငျလျှင်ပင်သူတို့၏ယခင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာမှပြန်လာသောနိုင်ညာဘက်အကူအညီဖြင့်အကြံပြုကြောင်း, ဆိုလိုသညျ။
အသက် ၁၀-၁၄ နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးများအတွက်ယခင်လိင်မှုအတွေ့အကြုံမရှိသည့်အတွက်ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းခလုတ်မရှိပါ။ အနာဂတ်တွင်မျိုးဆက်သစ်များကိုအမျိုးသမီးများအားကန့်ကွက်။ လိင်ဆိုင်ရာလုံးဝသဘောမကျသည့်အကြံဥာဏ်များရှိသည်။ အချို့အခြေအနေများတွင်သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့်အထိအစွန်းရောက်ပုံရိပ်များဖြင့်သူတို့၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်မည့်အမျိုးသားများရှိနိုင်သည်။ ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ခေါင်းကိုသဲထဲထည့်ပြီးစစ်မှန်တဲ့သိပ္ပံဆိုင်ရာအထောက်အထားအချို့ကိုမစောင့်သင့်ဘူး။ အခုငါတို့တစ်ခုခုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးယောက်ျားများထံမှအကြံဥာဏ် & Insights
နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုအသစ်များပြုလုပ်သကဲ့သို့ nofap သည်ကျွန်ုပ်၏ OCD ကိုများစွာကူညီခဲ့သည်။ ဖိုရမ်များတွင်ကျွန်ုပ်မကြားသောအရာတစ်ခုမှာဆေးဝါးသို့မဟုတ်ကုထုံးဖြစ်သည်။ ငါ့အဘို့, inositol ၏မြင့်မားသောဆေးများ valerian နှင့် NAC နှင့်အတူပေါင်းစပ် dopamine receptors reboots တစ်ဖြည့်စွက်, ငါ့စွဲလမ်းလျှော့ချပေးခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်မဖြစ်မနေစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများမကြည့်မိရန်ကျွန်ုပ်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုအားလုံးကဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်: Meds ဒေါက်တာ Gottman အဆိုအရအခြားသူတွေအချို့ OCD ခံစားနေရသူကိုကူညီပေမယ့်မရ:
(နေ့ ၁၃) ကျွန်ုပ်သည်အပြင်းအထန်ကြိုးစားနေသည် - ထို့ကြောင့်ခဲယဉ်းမှုမရှိ၊ အမျိုးသမီးများအပေါ်လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုလည်းမရှိပါ။ တစ်ခါတုန်းကကောလိပ်တက်နေတုန်း။ ၃ ပတ်ကြာ လိင်တူချင်းဆက်ဆံတာကိုငါထင်နေတဲ့အတွက်ငါပြန်သွားခဲ့တယ်။ ငါဘာကြောင့်သူတို့ကိုရိုက်နှက်တာမျိုးမခံစားရဘူးလို့ထင်လဲ ငါစိုးရိမ်တယ် ငါ၌လိင်စိတ်မရှိကြောင်းကိုလည်းသတိပြုမိသည်။ ထိုအခါငါ HOCD နှင့်အတူရှည်လျားသောရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းခဲ့ယခုငါစဉ်းစားကြဘူးအဖြစ်မှေးမှိန်။ ငါတို့စိတ်တွေဘယ်လိုကောင်းမကောင်းကိုရောဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာကိုအရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။
ဒါဟာမကြာခင်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်း HOCD ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်လာ မဟုတ် ငြင်းပယ်:
တစ်ခုသတိရပါ၊ ဒါဟာငြင်းပယ်မှုမဟုတ်ပါ။ ငါ့ကိုနားလည်ဖို့အခက်ခဲဆုံးပဲ။ မင်းကမိန်းကလေးတွေကိုကြိုက်တယ်၊ မိန်းကလေးတွေနဲ့အတူရှိနေတယ်၊ အမြဲတမ်းအဲဒီလိုဖြစ်မှာပါ။ OCD လှည့်စားသောကြောင့်ယခုဤနေရာတွင်ပါပဲ။ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ဟာထူးဆန်းတဲ့နေရာမှာရှိနေပြီးသင့်ရဲ့အချက်ပြမှုတွေကလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်မပစ်ခတ်နိုင်ဘူး။ သင်လိင်တူချစ်သူဖြစ်အံ့သောငှါကိုလက်ခံရန်ရှိသည်။ ဒါကရူးနေတယ်ထင်တယ်ဒါပေမယ့်ငါမဟုတ်ဘူး။ ပိုကြာလေပိုဆိုးလေလေအကြောင်းတစ်ခုခုလုပ်ဖို့သင်စောင့်နေလေဖြစ်သည်။ ငါ့ကိုယုံ။ ထိုစာအုပ်ကိုယူပြီးသင်၏ကုထုံးအားဘာတွေဖြစ်နေသည်ကိုရှင်းပြပါ။
သူတို့ကမင်းတို့လိင်တူချစ်သူဖြစ်မယ်လို့မင်းကိုပြောရင်မင်းကမင်းလိုချင်တာလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါ။ မရရှိပါက OCD အကြောင်းကိုသိသောကုထုံးကိုရှာပါ။ သင့်ကိုအမြဲစိတ်ချစေတဲ့ကုထုံးဆရာလည်းမလုပ်ပါနဲ့။ ဒါကလည်းအသုံးမဝင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နေရာမှာ ၁၀၀% မရှိတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့်သူကသိပ်ပြီးနီးစပ်နေပြီ။ ငါတကယ်ဘဝအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုမင်းရဲ့ကုထုံးကိုရှင်းပြပါ။ သူတို့ကမင်းတို့လိင်တူချစ်သူဖြစ်မယ်လို့မင်းကိုပြောရင်မင်းကမင်းလိုချင်တာလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါ။ မရရှိပါက OCD အကြောင်းကိုသိသောကုထုံးကိုရှာပါ။ သင့်ကိုအမြဲစိတ်ချစေတဲ့ကုထုံးဆရာလည်းမလုပ်ပါနဲ့။ ဒါကလည်းအသုံးမဝင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နေရာမှာ ၁၀၀% မရှိတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့်သူကသိပ်ပြီးနီးစပ်နေပြီ။ ငါတကယ်ဘဝအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါတယ်။
ငါငါ့ဥစ္စာနောက်ဆုံး update ကိုဖန်ဆင်းကတည်းကဒါဟာခဏတစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အခွအေနအောက်ပါသည်:
HOCD သည်အတော်လေးအချိန်အတန်ကြာသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်“ ထွက်လာခြင်း” လုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်း၊ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်သိမ်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ငါအကြောင်းတခြားဘာမှမရေးဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါ့ဘ ၀ ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုငရဲကိုယ်တိုင်လို့ဖော်ပြချင်လို့တောင်မှငါပုံကြီးချဲ့တာမဟုတ်ဘူး။
(ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးရက်အနည်းငယ်မှလွဲလျှင်) စိုက်ထူမှုသည် ၁၀၀% ပြန်ရောက်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုစွဲလမ်းနေသည့်အချိန်ကိုသတိရမိသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်အားစိုက်ထူရန်အရာမရှိချေ။
"သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ကျွန်မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုရှုပ်ထွေးမှုများအကြောင်းပြောနေခဲ့သည်။ သူက 'ငါရှာတွေ့ဖို့အခက်တွေ့နေတယ်။ ငါအင်တာနက်ပေါ်မှာသွားပြီးလိင်တူဆက်ဆံသူလို့ထင်စေတဲ့တစ်ခုခုကိုတွေ့တယ်။ ပြီးတော့ငါကလိင်တူဆက်ဆံသူလို့ထင်စေတဲ့တစ်ခုခုကိုတွေ့တယ်။ ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာငါကလိင်တူမေထုန်လို့ထင်စေတဲ့တခြားအရာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ ငါလိင်တူမေထုန်ပြုသူလို့ကောက်ချက်ချလိုက်တယ်! '
[နောက်ထပ်ကောင်လေး] ထိုအခါငါကသေချာပေါက် orientation ကိုအကြောင်းကိုမဟုတ်ဘဲလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအကြောင်းကိုစဉ်းစားတော့တာပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်စပြီးသုတေသနလုပ်တော့ကံကောင်းတာကဒီမှာပဲ။
[နောက်ထပ်ကောင်လေး] ထုတ်လုပ်သူတွေကသူတို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲယောက်ျားတွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပြောင်းဖို့ကြိုးစားနေတာ။ PMO ပြwithနာရှိသူယောက်ျားလေးသည်လိင်တူချစ်သူညစ်ညမ်းမှုနှင့်သာသက်ဆိုင်ကြောင်းတစ်နေရာရာမှာကျွန်ုပ်ဖတ်မိသည်။ အခုတော့ငါအဲဒီအဆင့်ကိုဘယ်တော့မှရောက်မလာခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အားလပ်ရက်မှာတစ်ချိန်ကအဲဒီပန်းချီကားတစ်ချပ်ကိုကျွန်တော်စမ်းခဲ့တယ်။ Transxual မြင်ကွင်းတစ်ခုပေါ်လာသည်။ (မိနစ် / စက္ကန့်တိုင်းမှာကျပန်းချန်နယ်များကိုဖန်သားပြင်များကတောက်ပြောင်ထားသည်။ )“ ငါအဲဒီမှာခံစားချင်နေတယ်” ဟူ၍ တစ်ခါမှမရခဲ့ဖူးသော်လည်းထူးဆန်း။ ထူးဆန်းသောသဘောဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။
ac * ck, အချို့သော t! ts အမျိုးသမီးတစ် ဦး မျက်နှာ, နမ်း, w * nking, bl * w အလုပ်အကိုင်များရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာတကယ့်ကိုထူးဆန်းတဲ့သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့အချက်အလက်တွေစုပုံနေသလိုပါပဲ။ အဲဒါကကျွန်မအတွက်လုံးဝအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။ သို့သော်သက်ဆိုင်ရာအချက်များအကြားဖြစ်ပေါ်နေသောဆက်စပ်မှုများအကြားအားနည်းချက်ရှိနေသည်။ အသင်းအဖွဲ့များသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကို (လိင်အကြောင်း) ပိုမိုစဉ်းစားမိစေရန်ကြံစည်မှုကိုမသိစိတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ရန်ကြံစည်နေသဖြင့်ကျွန်ုပ်စိတ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုသတိမပြုမိဘဲမြင့်မားသောအသစ်တစ်ခုကိုရနေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ အရာရာကိုငါ ထပ်၍ မကြည့်ခဲ့သော်လည်း၊ ယခုလူအချို့သည်အရူးအမူးစွဲမက်ခြင်းအထိပင်ရောက်နေပြီဟုကျွန်ုပ်သိပြီ စဉ်းစားတွေးခေါ်ပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက် Wow ကြောင်းနွားမအပေါ် udders ထွက်စစ်ဆေး!"..သူတို့လုပ်လား?" တိုတိုပြောရရင် PMO အလွန်အကျွံသည်တကယ့် Mindf * ck ဖြစ်သည်။
ငါအသက် ၁၅ နှစ်ကတည်းက HOCD ကိုကိုင်တွယ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ပထမဆုံးလိင်ဖျော်ဖြေပွဲမှာမိန်းကလေးကြည့်ပြီးတဲ့နောက်လိင်တူချစ်သူတွေကြားမှာဒီသရုပ်ဆောင်ဟာလူကြိုက်များတယ်လို့ဖော်ပြတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာအထူးသဖြင့် tranny porn ကြည့်ရှုရန်စတင်ပြီးနောက် ... ရှေ့ဆက်ကြောင်းအချက်ကနေစွဲဖြစ်လာခဲ့သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုမဟုတ်ရင် HOCD ကိုငါဘယ်တော့မှတီထွင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ ငါနှစ်ခုဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ထင်ပါတယ်။
အကြှနျုပျ၏ HOCD အမြဲငါ့အညစ်ညမ်း-related လှုပ်ရှားမှုများထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည်။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံကိုလိုက်နာဖို့အသုံးပြု:
1 ။ ညစ်ညမ်းပုံရိပ် / နှိုးဆွသောအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါ
2 ။ HOCD, ထစတင်သည်ငါ့ကိုစိတ်ပူရန်စတင်စေသည်
3 ။ HOCD အားကောင်းရရှိသွားတဲ့, ငါ့ကိုငါ့အလိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့သံသယဖြစ်စေစတင်သည်
၄။ ငါ porn ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လိင်တူချစ်သူမဟုတ်ကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသက်သေပြရန် HOCD မှကျွန်ုပ်အားစည်းရုံးသည်
5 ။ ငါ porn မှပြီးအောင် HOCD ကွယ်ပျောက်တတ်သောအကြောင့်အဘို့အကျသွားများအတွက်လူထုံများကဲ့သို့ခံစားကြရသည်။
- အဝိဇ္ဇာ - HOCD အပေါ်ဘာမှမလေ့လာပါနှင့်။ အဲဒါကိုမလေ့လာပါနဲ့။ အခြားကိစ္စများကိုမလေ့လာပါနှင့်။ သူ့ဟာသူနေပါစေ။ ငါအချို့ကုထုံး HOCD စိန်ခေါ်အကြံပြုငါသိ၏။ ၎င်းသည်သင်လုပ်ရန်ကောင်းကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်သင် HOCD ကဲ့သို့သောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်၎င်း၏ဘေးထွက်လက္ခဏာ (သို့) စွဲလမ်းမှု၏အဓိကကျသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လျှင်သင် "အတွေးများကိုစိန်ခေါ်မ" နိုင်ပါ။ သူတို့ကိုပိုဆိုးစေတယ်၊ ​​ပြီးတော့မင်းကနောက်ဆုံးမှာတော့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုပြန်ပေါ်လာတယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်မင်းဟာညစ်ညမ်းရုပ်ကိုစွဲစွဲလမ်းနေတုန်းမှာမင်းကဒါကိုရိုက်နိုင်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူး။ မင်းအတွက်၊ မင်းကလိင်တူချစ်သူကိုစွန့်ခွာသွားတဲ့အခါ၊ (သို့) ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၊ လိင်တူချစ်သူဟာလိင်တူချစ်သူကိုမင်းရဲ့ညစ်ညမ်းမှုနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်တယ်။ အနည်းဆုံးတော့သင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုရိုက်ကူးပြီးသည်နှင့် HOCD သည်အလွန်မှေးမှိန်သွားလိမ့်မည်။
- အချိန်ခွဲဝေချထားမှု: သငျသညျ HOCD နှင့်ပတ်သက်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူအဘယ်ကြောင့်အများဆုံးဖြစ်နိုင်သည့်အခါလေ့လာပါ, ငါ့အဘို့ညနေခင်း၌ရှိ၏ (ငါများသောအားဖြင့်5နာရီ porn မူးရူးသွားသောကြောင့်, တိုက်ဆိုင်မှု? ငါသံသယ။ ) ။ ထိုအချိန်အတောအတွင်းသင်စီစဉ်ထားသောအရာတစ်ခုခုသေချာအောင်လုပ်ပါ။ မိသားစု ၀ င်တစ် ဦး နှင့်ကွန်ပျူတာမှစကားပြောခြင်းသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းသို့မဟုတ်ဆွေမျိုးတစ် ဦး ကိုဖုန်းဆက်ခြင်း၊
- စိမ်: သငျသညျ spike စတင်လျှင်, သင်ချက်ချင်းအချို့သောလုံခြုံရေးအစီအမံလျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည်။ 'OCCUPY MODE' သည်ကျွန်ုပ်၏အဓိကလုံခြုံရေးအတိုင်းအတာဖြစ်သည်။ ငါစာလုံးကြီးတွေကိုရေးတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတိုးပွားလာတဲ့အခါငါခေါင်းကို“ OCCUPY MODE” လို့ခေါ်ပြီးနီယွန်နိမိတ်ကြီးတစ်ခုရေးထားတာကိုမြင်ယောင်ကြည့်လို့ပါပဲ။ ငါထို့နောက်တစ်ခုခု - ဘာမှ - သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်လိုအပ်သည်။ သင်္ချာဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းပေးသည့်အခါထိုင်ခုံများကိုလုပ်ခြင်းကဲ့သို့ပင်အလေးမများကိုထည့်တွက်ရာတွင်ပင်ရေတွက်နိုင်သည်။ ၁၅ မိနစ်ခန့် OCCUPY MODE ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ သင်၏ ဦး ခေါင်းနောက်ကျောတွင်“ OCCUPY MODE” အမှတ်အသားကိုမြင်ယောင်ပြီးသင်လုပ်သင့်သည်အတိုင်းလုပ်ပါ။ ခဏအကြာမှာတော့ဆူးကျော်လိမ့်မည်။
လိင်မှုကိစ္စနှင့်လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏နှိုးဆွမှုကိုလုံး ၀ ပျက်စီးစေသည်။ စာသားလိုပဲငါဘာမှမခံစားရတော့ဘူး။ ငါခံစားခဲ့ရသော“ ခံစားချက်များ” ကိုကျွန်တော်မှတ်မိသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ထိုတွင်မရှိတော့ပါ။ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကကျွန်ုပ်အားလိင်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သောလိင်မှုကိစ္စဖြစ်သည့်စင်မြင့်သို့ရောက်ခဲ့ပြီဟုယုံကြည်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ သို့သော်ယခုအပြောင်းအလဲမည်သို့ဖြစ်သွားသည်ကိုစကားလုံးများဖြင့်ပြောဆိုရန်ခက်ခဲသည်။ စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးများအတွက်နှိုးဆွခြင်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်မေ့သွားသည့်အဆင့်သို့မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
ငါ့အတွက် HOCD ထိန်းချုပ်မှုကို ၄ ပတ်လောက်တွေ့တယ်။ ရက်သတ္တပတ် ၂ ၏အဆုံး / ရက်သတ္တပတ် ၃ ၏အစမှာအမြဲတမ်းအခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်။ ငါ HOCD + Porn စွဲသည်အတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်း 4% ယုံကြည်တယ် သင် porn ကိုစတင်သောအခါ HOCD သည်မပြင်းထန်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် porn ၏ဆွဲအားသည်မပြင်းထန်ပါ၊ အချိန်နှင့်အမျှ၎င်းသည်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။
စကားမစပ်၊ ဒီဟာကလမ်းတစ်လမ်းတည်းမဟုတ်ဘူး။ လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားများသည်လိင်တူချစ်သူယောက်ျားလေးများကိုလိင်တူချစ်သူလိင်တူချစ်သူများထံမှတိုက်ရိုက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်မှာမဆန်းပေ။ အမျိုးမျိုးသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်အားထိုအရာအားလုံးကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ငါထင်တာကတော့ငါတို့ရဲ့အခြေအနေထက်တောင်ပိုဆိုးလိမ့်မယ်။ ငါတို့အတွက်တော့အဲဒါဟာငါတို့ရဲ့လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုကိုသံသယဖြစ်စေတဲ့သေးငယ်ပြီးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့စိုးရိမ်စရာပါ။ မိန်းမတွေကိုဘယ်တော့မှမကြည့်ဖူးဘူး၊ သူရဲ့ခံစားချက်အစစ်အမှန်ကိုလူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းကနေဖုံးကွယ်ထားသူ၊ ပြီးတော့သူကသူမနောက်မိန်းမတွေကိုဆွဲဆောင်ချင်လာအောင်ထွက်လာဖို့သတ္တိရှိသူ၊ ကောင်းပြီ၊ ဒါကလုံး ၀ ထိတ်လန့်စရာပဲ။
ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကတော့ဒီမေးခွန်းတွေကလူတွေကမဖြောင့်ပါဘူး။ ၎င်းတို့သည်အမျိုးသမီးများအားအမှန်တကယ်စွဲဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သူတို့သည်ငါတို့ကဲ့သို့လှေတစ်စင်းတည်းတွင်ရှိသော်လည်းပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်။
ငါ HOCD နှင့်ဆက်ဆံရတော့မယ်၊ ၎င်းသည်သင်သိသောအရာသည်လက်တွေ့မဟုတ်ဘဲကျပန်းအချက်များကြောင့်သင့် ဦး နှောက်မှလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတတ်ဖို့ငါလေ့လာခဲ့တဲ့နည်းကတော့အတွေးတွေကိုလျစ်လျူရှုခြင်း၊ သူတို့အတွက်မစဉ်းစားမဆင်ခြင်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏အမှန်တကယ်ဖြောင့်ကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း၊ အကယ်၍ မင်းကတစ်ယောက်ယောက်ကိုမျက်နှာ၌ရိုက်နှက်ရန်ကျပန်းကြံစည်မှုအတွေးရှိခဲ့လျှင်၎င်းကိုသင်မတွေးဘဲဖြတ်သန်းသွားသည်။
နောက်တစ်နည်းကတော့ပျော်စရာပါ။ နင်နဲ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူနင့်ကိုနမ်းနမ်းကြည့်မိတဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုပြောရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကို“ အိုး၊ ငါအရမ်းလိင်တူချစ်သူပါ၊ ငါနင်ကိုလုံးဝနမ်းချင်တယ်” လို့ပြောပါ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် HOCD ဟာငါခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ပြီးတော့ကျွန်မကိုပိုပြီးအတွင်းကျကျကြည့်ရှုစေခဲ့တယ်။ ငါဖြောင့်မတ်သည်ကိုသိ; ငါစတင်ကတည်းကငါဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ဖြစ်ခဲ့သည်စဉ်းစား ငါခံစားမိတာက porn ကိုအလွန်အမင်းနှိုးဆွပေးခြင်းသာဖြစ်သည်။ ငါ reboot လုပ်လေလေ HOCD ကငါ့ကိုလုံးလုံးလျားလျားအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိလေ၊ ရက်အတော်ကြာလာသောအခါငါရှိခြင်းကိုမမှတ်မိတော့ပါ။
တစ်ညတွင်အရက်အလွန်အကျွံသောက်ပြီးကျွန်ုပ်၏လိင် / ဆွဲဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောအမှန်တရားကိုရှာဖွေရန် trans နှင့်စမ်းသပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်း၌အကြံရခဲ့သည်။ ဒီ့ထက်ပိုပြီးအသုံးမ ၀ င်တဲ့အချိန်မှာ၊ ငါအွန်လိုင်းပေါ်မှာစကားပြောပြီးတွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ ငါ trans ဆိုတဲ့ porn ကိုစိတ်ကူးလျှင်ငါအတန်ငယ်နှိုးဆော်ခြင်းရှိ၏, ဒါပေမယ့်အတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးမှန်ကန်သောခံစားရတယ်နှင့်ငါရွံရှာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါဘာမှမနှင့်အတူဖြတ်သန်းလို့မရဘူးနှင့်ထုတ်ပယ်ခဲ့ရသည်။
အဲဒီလိုဖြစ်ပြီးနောက်ငါ၌ငါ့ထံသို့မိန်းကလေးအနည်းငယ်န်းကျင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါနှိုးဆွခံစားခဲ့ရပြီးပရောပရည်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်သူတို့နှင့်စကားပြောခြင်း၏အတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးကိုကျမခံစားခဲ့ရသည်။ အဲ့တာမှန်တယ်ခံစားရတယ် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားဖြည့်ပေးဖို့မလိုပါဘူး၊ ဒါကဆွဲဆောင်မှုဟာညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်ဖြစ်ပြီးလက်တွေ့ဘ ၀ အတွေ့အကြုံတွေကိုကောင်းစွာသယ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာနောက်ထပ်သက်သေပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ငါ porn ကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းနှင့် Trans- ဆက်စပ်သောဘာမှမှဆွဲဆောင်ခံစားရတယ်ရပ်တန့်နောက်ဆုံးအချိန်ကနေဒီသိသင့်ပါတယ်။
တယောက်သောသူသည်သူ၏ technique ကိုဖော်ပြထား:
သငျသညျ obsessive အကြံအစည်နှင့်အရူးသွားကြသည်အခါ, ပိုကောင်းတဲ့အတှေးအဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်ဟုလုပ်ဖို့တစ်ခုခုကိုရှာပါ။ သဘာဝတွင်တစ်ဦးကလမ်းလျှောက်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးပဟေဠိ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခု, အနုပညာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး။ ဒါကြောင့်အလုပ်မလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်မှသာအတွေးကနေသင်တို့ကိုအာရုံပျက်နေပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည်။ တူသောပထမတော့သူကခံစားရ သင်သည်ဤအတှေးအထသောအခါအခြားအရာတစ်ခုခုစဉ်းစားသို့မဟုတ်လုပ်ဖို့သင့်ဦးနှောက်ကိုပြောပြကြသည်နှင့်ကမကြာမီအလုံအလောက်အတွက်နစ်မြုပ်မည်, အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှမြင်လိမ့်မည်။
ဤနည်းကိုစဉ်းစားပါ။ အတွေးများသည်နက္ခတ္တဗေဒ / အီစွမ်းစွမ်းအင်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာမင်းတို့ရဲ့စွမ်းအားနဲ့လုပ်ထားတာ၊ မင်းတို့သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားတာနဲ့သူတို့နဲ့အားကောင်းတဲ့ချိတ်ဆက်မှုသာလုပ်တာ၊ ပိုအားကောင်းလာတာတို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ သူတို့ကိုသင်မုန်းတီးလျှင်ပင်သူတို့ကို ပို၍ ပင်ခိုင်မာစေသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုမမုန်းပါနှင့်။ မစမ်းသပ်ပါနှင့်။
ငါအသည်းအသန်ညစ်ညမ်းလာပြီးကတည်းကငါ OCD လက္ခဏာသေးသေးလေးအချို့ရှိတယ်ဆိုတာအမြဲသတိထားမိခဲ့တယ် ဒါဟာဘာမှမဆိုးပေမယ့်ကျွန်တော့်အခန်းပတ် ၀ န်းကျင်မှာပုံမှန်အနေအထားမရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော့်အလုပ်အပေါ်အာရုံစိုက်ဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။ အခုသူတို့ပျောက်ကွယ်သွားပြီလိုပဲ။ ကျွန်ုပ်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ ဦး စားပေးစာရင်းတွင်များစွာနိမ့်သည်။ ကျွန်တော့် shit ကိုမစည်းရုံးခင်မှာအရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငါဖယ်ထုတ်ပစ်မယ်။
ဟုတ်တယ်… OCD ကမထွက်ပေမယ့်ငါ့လက်သည်းလက်သည်းကိုက်တဲ့အလေ့အကျင့်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ သူတို့ကိုငါအတင်းအကျပ်သုတ်သင်ပစ်လိုက်သည်၊ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏လက်ချောင်းများအဆုံး၌ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောဖြုန်းတီးနေသောအရာသာဖြစ်သည်။
ငါကညစ်ညမ်းနေတဲ့အချိန်၊ အရူးအမူးစွဲလမ်းစရာဒါမှမဟုတ်သူတို့ထွက်သွားတဲ့အရာတစ်ခုခုမှာငါနှင့်အတူတူပါပဲ။ ငါသေချာပေါက် PMOing နှင့် OCD နှင့်ဆက်စပ်မှုကိုကြည့်ပါ။ ဒါဟာငါ့အတွက် PMO စွဲကနေတီထွင်ခဲ့တယ်။
သငျသညျ Shemale porn / လိင်တူချစ်သူ porn / bi- လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ porn ကိုကြည့်ရှုပါကလက်ခံပါ။ fuck ဆိုတဲ့ငါ့ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒါကခက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်လုပ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်အမှန်တကယ်ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမနှစ်သက်သည်ကိုသိရန်လွယ်ကူသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်တစ် ဦး သိချင်စိတ်ရှိခဲ့? သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရှင်၏ညံ့ဖျင်းသောဆက်ဆံမှုကိုခံခဲ့ရခြင်းသို့မဟုတ်သင်၌ပွင့်လင်းသောစိတ် ရှိ၍ စူးစမ်းလိုစိတ်ရှိသော်လည်းသင်ပြုခဲ့သည့်အရာကိုသင်ကိုယ်တိုင်နှင့်ဆန့်ကျင်နေလျှင်ပင်လက်ခံရမည်။
မည်သူမျှမဟုတ်ဘဲစိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲမိတ်ဆွေတစ်ဦးမဟုတ်တစ်ဦးက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုသင်နေသောသင်ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ သင့်ဦးနှောက်ကသင်၏အသက်တာ၌ဘာမှလုပ်နေတာကနေသင်တို့ကိုကြိုးစားစောင့်ရှောက်ဖို့, သငျသညျတွှေအရာတက်စေမည်။ ဒီစိုးရိမ်ပူပန်လျက်နှင့်မစစ်မှန်တဲ့ယုတ္တိဗေဒဖြစ်ပါတယ်နားလည်သဘောပေါက်။
သင်လိင်တူချစ်သူတွေကိုစမ်းကြည့်သင့်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုနားမထောင်ပါနဲ့။ ဒီဟာကအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ပေမယ့်ဂရုမစိုက်ပါဘူး မင်းဘဝတစ်ခုလုံးကိုဖြောင့်ဖြောင့်မှန်မှန်ထားမယ်ဆိုရင်မင်းဟာအမြဲတမ်းဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ်မတ်နေပါလိမ့်မယ် ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာပြcrisisနာကိုကျော်လွှားရန်မလိုအပ်ပါ။ လိင်တူချစ်သူတွေ၊ ကြိုးစားပြီးဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်ချင်တဲ့သူတွေနဲ့အတူတူပါပဲ။ သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုမုန်းတီးသွားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်မှန်မှန်လိင်တူချစ်သူတစ် ဦး အတွက်မဟုတ်ပါ။
အင်တာနက်ပေါ်တွင်အဖြေများကိုရှာဖွေခြင်းကိုရပ်ပါ။ ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ? ဖိုရမ်များသို့မသွားပါနှင့်၊ HOCD ကိုမကြည့်ပါနှင့်၊ သူ့ဟာသူနေပါစေ။ သင်သာအဖြေများရှာခြင်းဖြင့်ပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ ကျွန်တော့်ကိုယုံပါ၊ အစဉ်အမြဲပြောင်းလဲသွားမှာကိုကျွန်တော်ကြောက်တယ်။ ငါ OMG IM ဟာလိင်တူချင်းချစ်သူတွေဖြစ်လာတော့မှာကိုငါကြောက်တယ်။ တစ်နေ့တော့ငါစာသားကို fuck ဆိုတဲ့မပေးတော့ဘူး။ ငါစာမဖတ်တော့ဘူး၊ စဉ်းစားတော့တာပဲ၊ ဘာကိုမှန်းလဲ၊ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကအပြည့်အ ၀ ပြန်လာပြီးငါသဘောပေါက်လာတယ်။ ဘယ်ငါ့နောက်ဆုံးအချက်မှငါ့ကိုဆောင်တတ်၏
စိုးရိမ်ပူပန်မှုကတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာသို့သော်ယဉ်စေနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်သင့်အားမမှန်မကန်သောအရာများကိုယုံကြည်စေပါလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်က၎င်းအားအရှိန်မြှင့်ပေးသည်ကိုသင်သတိပြုရပါမည်။ သငျသညျကဖြစ်ပေါ်စေသောတ ဦး တည်းဖြစ်ကြသည်။ အခြေအနေများကပိုပြီးထွက်လာစေခြင်းငှါသင်တို့မူကားသင်ထိန်းချုပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကိုခင်ဗျားကိုဒီလိုပြောလိုက်ပါရစေ - ငါထင်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုပြန်သွားတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းအုပ်စုတစ်စုအတွက်မတရားသောရှိပါတယ်, လူတိုင်းမတရားသောဆိုလိုသည်မဟုတ်။ ငါလှသောအမျိုးသမီးများနှင့်အမြဲစွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲလမ်းခဲ့သည်။ အခုဘာကျန်သေးတာလဲ ငါ့အညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာစွဲ ဒါကနောက်ဆုံးသောအရာသည် ဒီမှတဆင့်သွားသူမည်သူမဆိုဖို့ငါ့အကွံဉာဏျ, porn ရပ်တန့်။ ဒါဟာကူညီပေးသည်။ အချို့သောပညာရှင်ကလိင်အကြောင်းပြောတာကိုမယုံပါနဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ပါ။ ၎င်းသည် Reddit တွင် WAY မကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိသည့်မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုအခွင့်အာဏာကိုနှစ်သက်စေသည်။ ဝေးလည်း reddit ထံမှနေပါ။ သင့်ကိုယ်သင်စဉ်းစားရန်နှင့်ကုသရန်အခွင့်အလမ်းပေးပါ။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်တဲ့ယောက်ျားတွေပဲ ငါသည်ငါ့မြည်းကိုပယ်ရယ်မောဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဒီအချိန်မှာလိင်တူချစ်သူဖြစ်ခဲ့သည်ငါ့ကိုပြောပြနိုင်ဘူး။ ဘာမှမဖြစ်လျှင်, ဒီငါ့ကိုအရင်ကထက်အများကြီးပိုအားကောင်းစေခဲ့သည်။ OCD နှင့်အခြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများသည်အခြားအရာများထက်အမှန်တကယ် ပို၍ အထောက်အကူပြုကြောင်းသတိပြုပါ။
ရှိ (သို့မဟုတ်ခဲ့) သောသူတို့အနေဖြင့်ပိုမိုသောလေ့လာတွေ့ရှိချက် HOCD:
နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကသူဟာလိင်တူချစ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိခဲ့သူတစ် ဦး တစ်ယောက်က HOCD မရှိဘူးလို့လူတိုင်းကိုယုံကြည်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာ porn ကိုပြန်ပြောင်းရတော့မယ်၊ တကယ်တမ်းမှာ HOCD ရှိသူ။
syndaren စိတ်မပူပါနဲ့ HOCD ဝေဒနာခံစားနေရသူတစ်ယောက်။ ငါ OCD ရောဂါခံစားခဲ့ရသည်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည် HOCD ရောင်စဉ်အပြင်ဘက်တွင်လည်းပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်ပြသခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခန့်ကကျွန်ုပ်သည်အလွန်စိတ်ရှုပ်ထွေးခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်တူချစ်သူလိင်တူချစ်သူအဖြစ်လိင်တူချစ်သူဖြစ်လာသည်ကိုယုံကြည်မိသောကြောင့်အလွန်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှုများကိုခံစားခဲ့ရသည်။ ယခုတွင်ငါသည်ကောင်းသောအဘို့အရုပ်ထွက်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ခရီးစတင်ခဲ့ပြီး, ကိုယ့်လိင်တူချစ်သူ porn အပေါ်ခံစားချက်များကိုအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ဒါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာငါ့ကိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာမရှိပါဘူး, တကယ်တော့ငါအဲဒီနှစ်မှစ။ လိင်တူချစ်သူဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုတစ်ခုတည်းသောအတွေးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ အခုတော့ OP ကိုပြောပြပါ။ ဘယ်လိုငါလိင်တူချစ်သူအဖြစ်လျှို့ဝှက်သတ်မှတ်ထားတာလဲ။
ကျနော့်အတွေ့အကြုံအရသူတို့လိင်တူချစ်သူဆိုတာသိတဲ့လူတွေအကြောင်း၊ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းကသိပြီး HOCD နောက်ကွယ်မှာပုန်းနေလို့ပါ၊ သူတို့ကဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်သိတယ်လို့သိတဲ့သူတွေ၊ လိမ်ညာခြင်း ဘယ်ကသိသာမဟုတ်ပါဘူး။
ဂယ်ရီ Wilson ကသင့်အားသတင်းအချက်အလက်များစွာပေးခဲ့သည်။ သို့သော်သင်ကထို OP ကိုတုံ့ပြန်ပုံမရ။ သူကသူ့ပစ္စည်းပစ္စယတွေကိုသိလို့သူ့ဆီကနေအကြံဥာဏ်အနည်းငယ်ယူလိမ့်မယ်။ သငျသညျလိင်တူချစ်သူထွက်လာပြီလို့ပဲ (HOCD အဆင့်မှာတောင်မင်းသိပြီထင်တယ်) HOCD မရှိဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။
ငါ HOCD ကြောင့်စင်ကြယ်သောအိပ်မက်ဆိုးဘ ၀ ၌နေခဲ့ရသည်။ ငါဒီအတွက်ကုထုံးကိုလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ငါအဲဒီမှာတည်ရှိနေသောသက်သေသာဓကတစ်ခုပါ။ တကယ့်လက်တွေ့ဘ ၀ မှာအဲဒီလိုလုပ်ဖို့တကယ့်အလိုတော်နှင့်သဘောသဘာဝကိုမကိုက်ညီဘဲညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအပြောင်းအလဲလုပ်ရန်လုံးဝဖြစ်နိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကို OP ဟုမပြောပါနှင့်၊ လူများက၎င်းကိုကြင်ကြင်နာနာမဆက်ဆံပါ။
ကျွန်ုပ်၏ကုထုံးဆရာကကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်ကျွန်ုပ်၏ OCD ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်သိသာသောလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ဟုယုံကြည်သည်။
ဒီတော့ငါ ၁၈ နှစ်အရွယ်ကတည်းကညစ်ညမ်းဆေးစွဲတာကိုခံနေရတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၈ လအတွင်းတကယ့်ကိုပြproblemနာဖြစ်လာတယ်။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးတဲ့နောက်ထူးဆန်းတဲ့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွေးတွေကိုစတင်ခံစားခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ခဏအကြာမှာ ဦး နှောက်တွေမြုပ်သွားလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွဲလမ်းနေချိန်မှာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရပ်တန့်သွားနိုင်တဲ့ငါ့ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရား (တရားမဝင်သောအရာ) နဲ့မကိုက်ညီတဲ့အရာတွေကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်ဖို့တောင်မှတောင်ဆွဲဆောင်ခဲ့တယ်။
သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်ငါတစ်ကြိမ်တွင် ၂-၃ နာရီခန့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်အတူနေရာအသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့လာသောအခါ၌ပင်သူမကိုအလုပ်သွားရန်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ပြီးခဲနှင့်ကျောက်ခဲနှင့်ပေါက်သတ်ဖြတ်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆုံးမှာ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ဟာစာသားပျက်သွားတဲ့အခါနောက်ဆုံးတော့အရာရာတိုင်းဟာခေါင်းကိုက်လာတယ်။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုရပ်တန့်လိုက်တာနဲ့ငါသဘောမတူခဲ့တဲ့အရာအားလုံးဟာအပြစ်ရှိတယ်လို့ခေါင်းကိုငုံ့လိုက်တယ်။
ငါနောက်ဆုံးတော့ငါ့အကုထုံးထံမှအတည်ပြုချက်ကိုအတန်ငယ်ရတယ်။ ငါ၌စွဲလမ်းမှုရှိသည်ဟုမည်သည့်အခါကမျှယုံမှားခြင်းမရှိခဲ့သော်လည်း၊ ခဏခဏပြန်ပြောင်း။ အတွေးများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ဆိုးကျိုးများကိုကြုံတွေ့ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏အရသာများပိုမိုမြင့်တက်လာသည့်လမ်းကြောင်းသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပြီးနောက်နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သာမဟုတ်ကြောင်းလက်ခံခဲ့သည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုနှစ်သက်တဲ့သူ၊ သူမဘဝမှာသူနှစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရထိုက်သူကောင်လေးတစ်ယောက်။ ငါနောက်ဆုံးပြန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ vanilla porn ကိုကြည့်ဖို့၊ အခြားလူများနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်ထူးဆန်းတဲ့မငြိမ်မသက်စကားပြောတာတွေထဲကတစ်ခုကိုသုံးဖို့သုံးရက်ကြာခဲ့တယ်၊ ငါကတခြားသူတွေနဲ့တစ်ကိုယ်ရည်သုံးပွိုင့်ကိုကူးပြောင်းခဲ့တယ်။ ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်တောင်မှကျွန်တော်တစ်ခါမှမစဉ်းစားဖူးဘူး။
ငါ့ရဲ့စွဲလမ်းမှုကငါ့ကိုဘယ်လောက်အထိထိခိုက်စေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့နက်ရှိုင်းစွာလဲကျသွားခဲ့တယ်။ ငါရေးလိုက်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကသေးငယ်သောထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သောအတွေးများကိုကြုံတွေ့ရပြီး၎င်းသည်ကြီးမားသောသဘောတူညီမှုလားမဟုတ်သည်ကိုစဉ်းစားနေသူအတွက်ဖြစ်သည်။ ငါပြုခဲ့သောတူညီသောအမှားမဖြစ်စေပါနှင့်။ ပြtheနာကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအသိအမှတ်ပြုပါ။
4-6 နာရီ porn Bing ကနောက်ဆုံးစုံတွဲရက်။ အဆိုပါပေါင်းဘက်တွင်က transexual porn ကိုငါ့လိင်မသက်ဆိုင်သောကြောင်းကိုပိုပြီးသိသာဖြစ်လာခဲ့ပါဘူး။ porn ကိုကြည့်အတိတ် 30 ရက်ပေါင်းကျော်5+ နာရီဖြုန်းပြီးနောက် transexual porn ပျင်းစရာဖြစ်လာမှစတင်! ငါကအခြားပိုပြီးစက်ဆုပ်ရွံရှာခြင်းနှင့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ပစ္စည်းပစ္စယရှာဖွေနေစတင်ခဲ့သည်။
ငါ HOCD ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအရင်ကညစ်ညမ်းတဲ့လိင်ကိစ္စမှစပြီးသမ္မာသတိရှိလာတာကငါ့ကိုမထိမခိုက်နိုင်အောင်အရင်ကလောက်မထူးဆန်းပေ။ တစ်ခါတလေငါကလိင်တူချစ်သူလိုခံစားခဲ့ရတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ငါမှားယွင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ငါ့ခံစားချက်တွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။ လိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ porn ကိုကြည့်ဖူးတယ်။ လိင်တူချင်းချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်မမြင်ဖူးပေမယ့် porn ကိုရှာဖွေတဲ့အခါကျပန်းဖန်သားပြင်နဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင်သူငယ်ချင်းတွေကစကားပြောပြီးသူတို့လိင်တူချစ်သူတွေလိုပဲပြုမူဆက်ဆံတဲ့အခါတိုင်းကျွန်မလိင်တူချစ်သူတွေလိုပဲပြုမူဆက်ဆံလေ့ရှိတယ်၊ ငါမကြိုက်ဘူး၊ ဒါကငါ့ကိုမသက်မသာဖြစ်စေတယ်။
ကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်ဟာမိန်းကလေးတွေကိုအမြဲဆွဲဆောင်တတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်။ ငါသူတို့အနားမှာရှိနေရတာကိုကြိုက်တယ်၊ သူတို့အနံ့ခံသလိုပဲမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုငါ့လက်ထဲမှာကိုင်ထားလိုက်ရုံပဲ။ ငရဲငါပထမဆုံးအကြိမ် porn ကိုမိန်းကလေးများကြည့်ရှုရန်စတင်ခဲ့သည်။ ဟုတ်တယ်ငါလိင်တူချစ်သူဖြစ်ခြင်းအပေါ်ကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်များနှင့်တုံ့ပြန်မှုများသည်ကျွန်ုပ်မွေ့လျော်ရာမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုပျော်ရွှင်စေသောအရာ၊ နေ့စဉ်အတွက်နေ့စဉ်ထင်းရှူးထွေးနေခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည် OCD ၏ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်စိုးရိမ်ခြင်းကြောင့်စက်ဝိုင်းပုံသဏ္meာန်ဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုသံသယဖြစ်စေသည်။ ငါမဟုတ်ဘူးတစ်ခုခုဖြစ်ခြင်း၏ သို့သော်ငါပြောခဲ့သကဲ့သို့ငါခဏတစ်ဖြုတ်ခံစားမိပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်အတွေးများနှင့်မသက်ဆိုင်တော့ကြောင်းငါခံစားခဲ့ရသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုမှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုများမှဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဦး နှောက်တွင်းရှိလမ်းကြောင်းများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ငါ့အဘို့ 9ish နှစ်ပေါင်း။ ငါနားလည်သောအရာမှငါသည် MO'd လုပ်သောအခါတိုင်းငါ့ ဦး နှောက်ကိုဖန်တီးထားသော MF မြင်ကွင်းသို့သွားပြီးထိုလမ်းကြောင်းကိုအားဖြည့်ပေးခဲ့သည်။ ထိုအရာရှိအရာများသည်လှပသော၊ အဝတ်အချည်းစည်းရှိသောလူတစ်ယောက်ကဲ့သို့ကောင်းသောအချိန်ကာလနှင့်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုလုပ်နိုင်စေသည်။ ခြားနားချက်ကိုမပြောရဘူး။ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကိုအသစ်တစ်ခုဆီပြန်ပြောင်းလိုက်ပြီ။ တစ်ခါတလေအားကစားရုံမှာကြည့်ကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်ကြွက်သားကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဒါကငါ့ရဲ့အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးကျွန်မကြည့်ရတာမဖြစ်မနေပါလိမ့်မယ်။ မိန်းမဖြစ်သူကသူမအားနှိုးဆွသော်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရမဟုတ်ပါဟုပြောသည့်အခါ၎င်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိလျှင်အမျိုးသမီးများမည်သို့ခံစားရသည်ကိုယခုငါသိပြီ။
ဘတ်စကက်ဘောဂိမ်းကြည့်နေစဉ်ဒါဟာဒီဖြစ်စဉ်ကကျွန်တော်ဒီဟာကိုကြည့်ရတာဒီကစားသမားကလူကောင်းတစ်ယောက်ပါ” ဟုတွေးမိပြီးသူတို့ရုတ်တရက် HOCD အတွေးများပေါ်ထွက်လာခဲ့သည် (ကျွန်ုပ်သည်လိင်တူချစ်သူ၊ WTF၊ ငရဲလွတ်သွားသည်) ။ အဲဒါကိုကျွန်တော်မေ့လို့မရခဲ့ဘူး၊ အဲဒီညမှာပဲကျွန်တော့်ဘဝမှာပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုတစ်ခုကြုံခဲ့ရတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်စမ်းကြည့်တယ်၊ ငါလိင်တူချစ်သူညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါစက်ဆုပ်ရွံရှာခဲ့တယ်။ ဒီရောဂါနဲ့ဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲဆိုတာကိုအရင်လေ့လာဖို့အချိန်အနည်းငယ် (လအနည်းငယ်) အချိန်ယူခဲ့ပါတယ်။ လိင်တူချင်းချစ်တာကိုရွေးချယ်လို့မရဘူး၊ ငါ obsessing ရပ်တန့်.
မကြာခင်မှာပဲငါဟာကြီးမားတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ချစ်မိသွားပြီးပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် HOCD ဟာငါ့အတွက်ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငါလိင်တူချစ်သူမဟုတ်, ဘယ်တော့မှခဲ့ပေမယ့်လိင်တူချစ်သူဖြစ်ခြင်းမှားဘာမှမရှိဘူး, ဘယ်သူမှဘာမှလုပ်ဖို့သင့်ကိုအတင်းအကျပ်, သင်ကသာယာပျော်ရွှင်မှုပေးလျှင်ပြုပါလျှင်ထို့နောက် obsessive dont မဟုတ်! ကျွန်ုပ်တို့သည်လူသားများမည်သည့်ကျား၊ မနေပါစေ၊ အလှတရားကိုအသိအမှတ်ပြုနိုင်သည်။
ငါ 13 အခါအဝေးကနေဣတ္ဘာမှအားဖြင့်ဖွင့်ဖို့ကိုသုံးပေမယ့်ငါပိုပိုပြီး porn watched အဖြစ်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါဖြောင့်သမိုင်းပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်ကိုသိသောကြောင့်, ငါသည်ငါ့လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးရိမ်ပူပန်ရမှစတင်ခဲ့ပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်မကိုယ်ထိလက်ရောက်အဟောင်းတွေကိုတုံ့ပြန်နိုင်ဘူး။ ကျွန်မအထူးသဖြင့်ဖြေလျော့ပေးခြင်းသို့မဟုတ်အရက်မူးတုန်းကတခါတရံကျွန်မအသက်ငယ်စဉ်အခါငါလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်လောက်နဲ့တူတုံ့ပွနျမညျ။ ငါမဆိုလိင်တူဆက်ဆံသူစိတ်ကူးယဉ်သို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒများမရှိခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအလွန်ရှုပ်ထွေးခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်သည်ဤဆိုဒ်ကိုမထိမိပါကညစ်ညမ်း / dopamine ထိခိုက်မှုလျော့နည်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အခါကမျှမှတ်ချက်ချလိမ့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ [ကျွန်ုပ်၏ reboot] သည်သံသယလုံးဝကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပြီဖြစ်သောကြောင့်ယခုကျွန်ုပ်၏ libido ကိုင်တွယ်ရန်အလွန်နီးကပ်နေပြီဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ငါမကြည့်မိသောမိန်းမများပင်လျှင်ငါသူတို့နှင့်လိင်ဆက်ဆံနိုင်လိမ့်မည်။ အမျိုးသမီးများအပေါ်ပိုမိုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ပိုမိုတုံ့ပြန်မှုများ by အမျိုးသမီးတွေ။
90 ရက်, 86 ရက်ပေါင်းမျှမအော်ဂဇင်။ နှစ်ကြိမ်ရှေ့ကနေ, ခေတ္တမျှနှစ်ကြိမ် (edging မသက်ဆိုင်သော) porn ရှုမြင်ကြသည်။ လူမှုစိုးရိမ်စိတ်, HOCD နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုကျနော်တို့မှာအများကြီးလျော့နည်းသွား။ ယုံကြည်စိတ်ချမှုဖွင့်, စွမ်းအင်အထိခိုင်ခံ့စေ၏ဆက်ဆံရေးကို, နှင့်မိန်းကလေးများအတူအဆမဲ့ flirtation ။ AMA ။
ကျွန်ုပ်သည် HOCD နှင့်ကြာမြင့်စွာမရုန်းကန်ခဲ့ရသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်“ ပျောက်ကင်းသွားပြီ” ဟုပြောရန်စောလွန်းသေးသည်။ သို့သော်ထိုဆိုဒ်များကကျွန်ုပ်ကိုအတော်လေးကူညီနိုင်ပုံရသည် -
ငါအရင်က HOCD ကိုရှာဖွေခဲ့ဖူးတယ်၊ တခြားလူတချို့အဲဒီအကြောင်းပို့စ်တင်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့အကောင့်တွေကတကယ်မကူညီဘူး။ ငါကဒီရောဂါခံစားနေရတာတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသေချာပေမယ့်တိုက်ခိုက်မှုကမပြင်းထန်ဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်နှစ်ခုကကျွန်မကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ သူတို့ကိုငါဖတ်ပြီးကတည်းကငါမှာ HOCD အတွေးတွေမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကို“ အိုဟေ့ငါ HOCD အတွေးတွေတော့မစဉ်းစားတော့တော့ဘူး” လို့တွေးမိတဲ့အခါအနည်းငယ်စိတ်ပူမိတယ်။ ဟားဟား
ဒုတိယ site သည် p / m / o abstinence ကိုလည်းအကြံပြုသည်။ HOCD သည်လုံးဝရှင်းလင်းသွားလိမ့်မည်သေချာသည်။ သိမှုဆိုင်ရာနည်းစနစ်များနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်မဆုတ်မနစ်သောရောဂါများကိုမည်သို့ကုသသည်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်ခြွင်းချက်မရှိပါ, မှလွဲ၍ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်မဖော်ထုတ်ပါ။ ငါလုံးဝပျောက်သွားတဲ့အထိအားနည်းလာပြီးအားနည်းလာတယ်လို့ထင်တယ်။
(တစ်နှစ်အကြာတွင်အခြားဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ထံသို့) ကျွန်ုပ်တွင် HOCD လေးနက်သည်။ အခုတော့ကုန်သွားပြီ။ “ အမျိုးသမီးတွေက sexy ပါ၊ မင်းပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ငါ့သူငယ်ချင်း၊ ဒီအရာအားလုံးကိုအဓိကသော့ချက်ပဲ။ သင်သည်လိင်ခြားသူသို့မဟုတ်လိင်တူဆက်ဆံသူဖြစ်ပါကအမျိုးသားများသည်ရိုးရှင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်သည်လိင်အင်္ဂါနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူဖြစ်လျှင်ဆိုဖာပေါ်တွင်သူတို့နှင့်အတူထိုင်။ သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုလျစ်လျူရှုပြီးသူတို့နှင့်အတူစိတ်ကူးယဉ်လမ်းလျှောက်ချင်လိမ့်မည်။
အသားအရောင်ခွဲခြားမှုကိုတိုးမြှင့်လာတဲ့သူတွေကဆိတ်ကိုချစ်သူတွေလို့တိတ်တဆိတ်စိတ်ပူနေတယ်လို့ထင်သလား။ ယခုသူတို့သည်သူတို့စိုးရိမ်နေကြသည်ဟုထင်ပါသလား၊ သူတို့သည်တိရစ္ဆာန်များအဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားသောကြောင့်ရက်လုပ်ခြင်းသည်ဆိတ်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်သည်ဆိုသောအချက်ကြောင့်လား။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့မလုပ်ဘူး၊ ညစ်ညမ်းတဲ့ပုံစံ (ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကနေ) ဟာလုံးဝကွဲပြားခြားနားတယ်။
NoFap စတင်ကတည်းကငါ hetero မှနှစ်လတစ်ကြိမ်ကနေကြပြီ။ porn သင့်ဦးနှောက် program နိုင်ပါတယ်။
(နေ့ ၂၃ ရက်တွင်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုဖော်ပြခြင်း) ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်များထပ်မံမက်ခဲ့သည်။ တချို့ကျိန်းသေညစ်ညမ်း။ ဒါပေမယ့်ငါကပင်နှိုးဆော်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်အခုတော့ porn ကငါ့ရဲ့သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောမှုကို ဦး တည်မနေတော့တော့အဲဒါကိုလက်တွေ့ဘ ၀ မှာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ ဒါကဘာလဲဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ ဦး နှောက်ကအမှိုက်တွေကိုခွဲထုတ်နေတယ်။
မည်သူမဆိုရွှေဝယ်ယူဖူးသည်ဆိုပါက (ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီကနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းရှိခရီးသွား gold ည့်ရွှေတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့ထိုသို့ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း) အကယ်၍ အမှားများ၊ အမှိုက်များ၊ ကျောက်ခဲများအမြောက်အများကိုအစက်အပြောက်ဖြစ်စေရန်သင်ဖယ်ရှားပစ်ရမည်ကိုသင်သိသည်။ ရွှေ။ ဒါငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာအခုထိခံစားနေတုန်းပဲ။ ၎င်းသည်ဤအရာအားလုံးကိုလုံးဝစစ်ထုတ်ပစ်သည်။
ငါ့အတွက်အကျိုးရှိသည် - ငါလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြားဖြစ်နိုင်ချေများ (ဥပမာ၊ ငါ့အမေကိုသတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးသို့ထွက်ပြေးခြင်းစသည့်) ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောစိုးရိမ်ဖွယ်ရာအရင်းအမြစ်များဖြစ်လာနိုင်ခြေမရှိကြောင်းသဘောပေါက်သည်။ အဲဒီနည်းနဲ့ HOCD နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံဥာဏ်တွေလည်းမလိုဘူးဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြခဲ့တယ်။ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ အဝေးပြေးလမ်းမအလယ်တွင်ပြေး။ မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေရန်စဉ်းစားပါ။ တစ်မိနစ်ယူပြီးအသေးစိတ်စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ သငျသညျယခုရုံအတွေးရှိခဲ့ပါတယ်။ (မင်းတို့မှာလိင်တူချစ်သူတွေလိုပဲ) သင်ဟာကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေဖို့ကြောက်လန့်တကြားလျှောက်လှမ်းနေမလား။ Nope ။ မင်းလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး နောက်တဖန်ထိုဇာတ်လမ်းကိုသင်ဘယ်တော့မှစိတ်ကူး။ မရနိုင်ပါ။ မင်းလုပ်ရင်တောင်ရယ်လိမ့်မယ်။ ဒီမှာအတူတူစိတ်ကူး။
တကယ်တော့ HOCD ကိုကျော်ရတာကဂရုမစိုက်တတ်ဖို့သင်ယူတာပါ။ အချိန်မရွေးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာငါဟာစိတ်ပျက်စရာခွေးတစ်ကောင်လိုမြင်ယောင်မိတယ်။ ဝေး yapping, shih tzu ကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်အာရုံစိုက်လေလေ၊ ရလေလေဖြစ်သည်။ လုံးဝလျစ်လျူရှုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်အထိတဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းသွားမည်။ အများအားဖြင့်မိုင်းသည်ယခုအခါထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည် လိင်စိတ် flatline ငါနှင့်အတူတကယ်ရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ် ဒါဟာအဆုံးစွန် combo ပါပဲ။ ငါလိင်စိတ်နိုးထလာတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးရင်တကယ့်ကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်တော့မယ်။
[ခေတ် 22] ကိုယ့်ကိုငါ့ညစ်ညမ်းအရသာကနောက်ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာဖော်ပြချင်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာအလွန်ပျော့ပျောင်းခဲ့တယ်။ ထိုအခါလိင်တူချစ်သူ porn ငါ့အဘို့ပြု, ပြီးတော့တစ်ဦးလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျနော် shemale ညစ်ညမ်းသို့လဲ, နှင့်အချိန်ကျော်ငါဒီနေဖြင့်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်သဘောပေါက်လာတယ်။ ထိုအခါကရံဖန်ရံခါကျနော်လိင်တူချစ်သူညစ်ညမ်း ပို. ပို. မကြာခဏဖြစ်လာခဲ့သည်ကျော် masturbate မယ်လို့ပိုဆိုးတယ်။ ဒါဟာငါ့အပေါ်မှာလှည့်ပေမယ့်ဒါမှားယွင်းတဲ့ခံစားခဲ့ရပြီးနောက်။
ငါဖြောင့်သည်ဟုငါသိ၏။ ငါနှင့်ပေါင်းသင်းသောအခါ၊ ယောက်ျားများသည်ကျွန်ုပ်စိတ်တွင်နောက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ငါတော်တော်လှတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုဆွဲဆောင်တယ်၊ သူတို့ကိုတစ်မိုင်အကွာအဝေးကနေသတိထားမိတယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကကျွန်မရဲ့အရသာကိုအစွန်းရောက်စေခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ငါကရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲလား၊ မရှုပ်ထွေးဘူး၊ ဒါပေမယ့်အခုငါပြန်ကြည့်လိုက်တော့ငါဟာရိုးရိုးလိင်မတူသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်လာတယ်၊ ဒါကငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေနဲ့ပြန်လည်ချိတ်ဆက်လိုက်တာပဲ။ ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာငါ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ကောင်မလေးကအံ့သြလောက်အောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးသူမအတွက်အပြည့်အဝပဲ။ သို့သော်၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ပြီးတော့လအနည်းငယ်အကြာမှာတော့ဒီမိန်းကလေးဟာပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတာမှလွဲရင်နောက်တစ်ခါထပ်ဖြစ်လာတယ်။
[တစ်လ reboot သို့] ငါပြီးခဲ့သည့်ညဥ့်ကကြောက်မက်ဘွယ်အတှေ့အကွုံခဲ့ငါပါတီတစ်ခုမှာနှင့်အဆုံးမှာမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူထွက် (သူမတော်တော်လေးမဟုတ်ခဲ့) ငါတော်တော်လေးချက်ချင်းအကြီးအကျယ်စိုက်ထူရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ငါက 'အိုဘုရားသခင်' နဲ့တူတယ်၊
ကျွန်တော်ဟာဆော့ဖ်ဝဲရေးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်နေပြီးကွန်ပျူတာရှေ့မှာနာရီပေါင်းများစွာကုန်ဆုံးနေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ငါ့ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကြည့်ရှုခြင်းကအရမ်းလွယ်ကူတယ်။ အခုငါလုပ်နေတယ်၊ ​​ကွန်ပြူတာတွေအားလုံးကိုလက်လွှတ်ဖို့ငါသွေးဆောင်နေတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ ဘီဘီစီသတင်းများ၊ အီးမေးလ်များသည်ကျွန်ုပ်အချိန်ကိုကုန်လွန်စေသောအရာများဖြစ်သည်။ ငါသာမိန်းကလေးများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ချင်!
ငါဘာကြောင့်လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်တာ ၀ န်ကိုညစ်ညမ်းသောအရာနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းသုံးပြီးကွန်ပြူတာရှေ့တွင်ငါ့အချိန်ဖြုန်းခဲ့သနည်း။ ယခုတွင်ငါသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောမိန်းကလေးအသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊ ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးအားကစားကစားခြင်းနှင့်ကျန်းမာခြင်းကိုအာရုံစူးစိုက်တော့မည်။
HOCD သည်ခွေးဖြစ်သည်။ သင်ခံစားနေရသောအရာသည်လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုမဟုတ်ဘဲစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ကိုသင်နားလည်ရပေမည်။ ငါ Flatline စဉ်အတွင်းကြောင်း shit နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ကြပြီးငါလိင်တူချစ်သူမဟုတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ အဓိကအချက်ကတော့ HOCD ခံစားချက်တွေကမင်းကိုရွံရှာစေတယ်။ ပြီးတော့သင့်ကိုစိတ်ပူစေတယ်။ သူတို့ကလိမ်တာပေါ့။
စိတ်မပူပါနဲ့နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ကိုသင်တို့အပေါ်မှာလှည့်ကွက်ကစားရန်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဒါဟာငါ HOCD တွေ့ကြုံသောအခါ, အာရုံကွောကျရှံ့ခွငျးမဟုတျဘဲအခြား dude ၏အမှန်တကယ်ရှိနေခြင်းကထုတ်လုပ်ခဲ့နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ကျွန်မကိုအချို့အချိန်ကိုယူ။
၎င်းကိုလျစ်လျူရှုခြင်းနှင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလေ့လာခြင်း၌သင်ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းကိုသင်မေ့သွားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် OCD ဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်သင်သည်ချောက်ကမ်းပါးအနားတွင်ရပ်နေပြီးသင်၏စိတ်ကခုန်နေသည်ဟုပြောသည်။
မင်းမလိုချင်ဘူးဆိုတာမင်းသိပေမယ့်မစဉ်းစားတော့ဘူးလား ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ပြီးတည်မြဲပါ။ သငျသညျငါနှင့်နှစ် ဦး စလုံးသင်ချောက်ထဲမှခုန်ချင်မယ်လို့ထက်လိင်တူချစ်သူဆက်ဆံရေးရှိချင်ကြဘူးကြောင်းသိ!
ကံကောင်းတာကငါလိင်တူချစ်သူသို့မဟုတ် tranny ညစ်ညမ်းသို့ဘယ်တော့မှသို့မဟုတ်ငါအခုဘယ်မှာစိတ်ခံစားမှုငါရှိရာမသိကြဘူး။ တီဗွီမှာလူတယောက်ဝင်လာတာကို OCD နဲ့ပိုတူတယ်၊ ငါ့ ဦး နှောက်က“ မင်းကမိန်းကလေးတွေနဲ့မထိတွေ့နိုင်ရင်ကောင်းပြီ၊ စစ်ဆေးကြည့်ပါ ဦး” ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်မယောက်ျားခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်တော့မှမခံခဲ့ရပေမယ့်သူကထုတ်လုပ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောင့်ငါ့ ဦး ခေါင်း၌စွဲလမ်းအတွေးဖြစ်စဉ်ကိုလုပ်, ငါ့လိင် - ဖျော်ဖြေဖို့ငါ့အ porn- သွေးဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းပဲအံ့သြဖွယ်လောင်စာ။ ငါ့အတွက်အရမ်းဆိုးတဲ့အချိန်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်ဒီ site ကိုငါတွေ့လိုက်တယ်၊ အဲဒီအတွေးတွေကိုအသိအမှတ်မပြုတော့ဘူး၊ porn ကိုမကြည့်တော့ဘူး၊
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိင်တူချစ်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ဖူးပေမဲ့လိင်တူချစ်သူလိင်တူချစ်သူတွေအပါအ ၀ င်၊ ဒါကြောင့်သင်ဟာဘာလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ရန်ခဏလောက်သန့်ရှင်းရမည်။ permalink
သင်၏ OCD ကိုမကျွေးပါနှင့်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (သို့) အခြားသူများ၏ထင်မြင်ချက်များအားဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်အမှန်တရားကိုယုံကြည်ရန်ကြိုးစားနေလျှင်သင် OCD ဂိမ်းကိုကစားနေသည်။ သငျသညျအချိန်ကာလသင်သည်အဘယ်သို့ဆိုနေကြသည်။ တစ်ခုခုကသင့်ကိုရွံရှာစေလျှင်နှိုးဆွမှုဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေသည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးပါ၊ ၎င်းသည်သင်၏အရသာအမှန်မဟုတ်ပါ။ ငါမေးခွန်းထုတ်အကြောင်းကိုမေ့လျော့ခြင်းနှင့်လုံးဝကသင်၏စိတ်ကိုချွတ်ပြောပါ။
သငျသညျသာယာသောလိင်ကွဲအတွေးအခေါ်များကိုခံစားရပြီး HOCD သည်၎င်း၏ရုပ်ဆိုးသော ဦး ခေါင်းကိုပွေ့ဖက်လိုက်လျှင်၊ ထိုအချိန်တွင်အားလုံးအတူတကွစိတ်ကူးယဉ်နေခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီးပိုမိုကျန်းမာသောစိတ်ကူးယဉ်မှုမပေါ်မချင်းဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်ဟုငါဆိုသည်။ သင် OCD ကိုအနိုင်ယူရန်မလိုပါ၊ သင်လုပ်ရမည့်အရာမှာ၎င်းသည်မုသာကောင်ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ။
ကျွန်မပထမဦးဆုံး HOCD စိုးရိမ်စတင်လာတဲ့အခါငါအနည်းဆုံး, အမှန်တကယ်အတော်လေးဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆော်ခြင်းမခံခဲ့ရသောအခါလိင်အပေါ်လှည့်ခဲ့ပါတယ်ကဲ့သို့ပြင်းထန်သောစိုးရိမ်နီးပါးခံစားခဲ့ရကဲ့သို့ပြုလုပ်သလိုပဲ။ ကျွန်မပထမဦးဆုံးမှာပိုပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ရတဲ့အရာ, စစျဆေးနှင့်နှစ်ဆစစ်ဆေးမှုများငါ့တွေကိုလျစ်လျူရှုကောင်းမွန်စွာပြုကြပြီ, ဒါပေမယ့်ယခုငါနေ့တိုင်းအနည်းငယ်လျော့နည်းစိတ်မပူပါနဲ့မှစတင်နေပါတယ်။
၆ နှစ်ကျော်လုံးလုံးမတူကွဲပြားသောမတူကွဲပြားသောညစ်ညမ်းသောအမျိုးအစားများသို့ငါနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသွားခဲ့ရသည်၊ အရူးလိုလိင်တူချစ်သူကဲ့သို့သောပုံရိပ်များကိုအဆုံးသတ်လိုက်သည်။ သူတို့ (အထူးသဖြင့်အာရှရှီးမာလ်များ) ကိုစတင်ကြိုက်သည့်အထိထိုင်းနှင့်ဂျပန်သို့သွားရန်ပင်စဉ်းစားခဲ့သည်။ ရုံအချို့ lol တွေ့ဆုံရန်။ shemales နှင့်လူမှုရေးအရအပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ပါ။ သို့သော်သို့သော်၎င်းတို့အပေါ်ကျွန်ုပ်၏ဆန္ဒမှာအလျင်အမြန်မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ထိုအခါငါအနည်းဆုံးနှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူခံစားခဲ့ရသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ... ၃ လမှ ၄ လကြာပြီးနောက်ငါ shemales နှင့်အခြားရိုးရိုးအပြုအမူများနှင့် ပတ်သက်၍ မေ့သွားခဲ့သည်။ အခုတော့အခု ၈ လအကြာမှာအပြာမကင်းတော့ဘူး။ မိန်းကလေးတွေတောင်မစဉ်းစားတော့ဘူး။ Heck ကျွန်မရဲ့ ဦး နှောက်ဟာကျွန်မရဲ့အသက် (၂၅ မှ ၃၀) လောက်မိန်းကလေးများကိုသာကြိုက်နှစ်သက်သည့်အထိပြောင်းလဲခဲ့သည်။
တခြားလူတွေကိုအကြံဥာဏ် - အခြေအနေတွေဆိုးရွားလာရင်မင်းရဲ့လိင်တူချင်းဆက်ဆံတာကိုမင်းစိတ်ကအာမခံနေရင်တောင်မှားတယ်။ ငါ့မှာဒီ reboot technique ကိုမယုံဘူး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသေကြောင်းကြံဖို့ကြံစည်နေပြီ၊ ဒါပေမယ့်ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တစ်ခါတလေမှာ။ အကယ်၍ သင်သည်၎င်းကိုအချိန်သို့မဟုတ်ရက်အနည်းငယ်မဟုတ်ဘဲအချိန်ပေးပါကရှည်လျားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းတွင်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်၊ သင်ကြာကြာကြာလေသင်ကိုယ်တိုင်ဟောင်းသို့ပြန်လာနေသည်ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ သင်ပိုကောင်းလာပါလိမ့်မယ်၊ ဒါဟာအချိန်ကိစ္စတစ်ခုပါ။ သငျသညျ relapse နှင့်စိတ်ကျရောဂါသို့လှည့်လျှင်ပင်, သင်မှောင်မိုက်၌ရှောက်သွားရနှင့်သင်အားလုံးပြန်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်လာမယ့်ကိစ္စဖြစ်ကြောင်းကိုသင်သတိရဖို့အတွင်းစိတ်အင်အားကိုရှာဖွေရန်ရှိသည်။
ငါသည်အမြင့်မား HOCD နှင့်အတူကို restart လူတို့အဘို့တရားအားထုတ်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒေသခံတစ်ဦးဘာဝနာစင်တာသွားပြီးညနေခင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆုတ်ခွာနေလုပ်ပါ။ ဒါဟာသူတို့ကိုရန်တုံ့ပွခြင်းမရှိဘဲသင်တို့၏အကြံအစည်စောင့်ကြည့်ဖို့ဒါမှကျန်းမာသန်စွမ်းသည်။
ကိုယ့်နေဆဲ porn ကိုကြည့်သောအခါငါပြန် ED, ကိုယ့်ကိုလည်းလိင်တူချစ်သူနှင့် tranny porn (အသေးစိတ် tranny porn သော်လည်း) နှင့်ရိုးရိုး porn စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်ခဲ့သည်။ ယခုမူကားဈ ED နှင့်အတူမည်သည့်ပြဿနာမျှရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးနဲ့ကိုယ့်ရည်းစားနှင့်အတူအကောင်းဆုံးဆက်ဆံရေးမျိုးရှိသည်။ http://www.yourbrainrebalanced.com/index.php?topic=5914.msg91811#msg91811
ပုံမှန် porn ကမလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါကွဲပြားခြားနားသောမိန်းမအမျိုးမျိုး, ရာထူးကွဲပြားခြားနားသောတွင်းအမျိုးမျိုးသို့ကြည့်ရှုကြ၏, ဒါကြောင့်ရုံတော့ဘူးမလောက်။ တစ်ယောက်ယောက်က shemale porn video ကိုပို့ပြီးငါ့ကိုလှည့်စားခဲ့တယ်။ တကယ်တော့မိန်းမတစ်ယောက်မဟုတ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုလှည့်ပေးခဲ့တယ်။ ဒီသရုပ်ပြကကျွန်တော့်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာ (ငါးနှစ်၊ ခြောက်နှစ်) လောက်မှီခိုခဲ့တယ်။ ငါအထီးမအင်္ဂါနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲမိန်းကလေးများနှင့်တူအတိအကျ shemales အဘို့အလိုက်ရှာအတွက်ပျော်မွေ့သောကွောငျ့, ဟောင်းနွမ်းသောမသွားခဲ့ပါဘူး ငါကဒါငါ့ရဲ့လိင်ကိုထိခိုက်နေတယ်ဆိုတာသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါပဲဆက်ခဲ့တယ်။ ငါဟာလိင်တူချစ်သူဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်မိတယ် အမြိုးသမီးမြားမွကွေီးပျေါမှာအလှဆုံးအရာတွေဟာငါပျောက်ဆုံးခဲ့သည်။
သုံးလကြာ nofap ပြီးတဲ့အခါမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကငါ့ရဲ့ယေဘုယျလမ်းညွှန်ချက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ငါ့ကိုလှည့်လိုက်တယ်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုသံလိုက်လိုခံစားရတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများနှင့်အလွန်ရင်းနှီးပြီးသူတို့နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်လိုသည်။ nofap မတိုင်မီအမျိုးသမီးများကိုတွေ့သောအခါ“ နင့်ကိုငါဂရုမစိုက်ဘူး၊ ဒီနေ့လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်၊ ​​ငါဟာအမျိုးသမီးအများစုနဲ့အတူစရိုက်လက္ခဏာတွေနဲ့ဆွဲဆောင်ခံရတယ်။ ငါလုံးဝသဘောကျတယ် porn သည်ငါ့အတွက်မရှိတော့ပါ
ငါနောက်ဆုံး၌ငါ့အ libido မရှိခြင်း၏အကြောင်းရင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လိင်မှုကိစ္စကိုသေခြင်းတရားသည်ကျွန်ုပ်အပေါ်အကြီးမားဆုံးအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ထူးဆန်းတာကအသက် ၁၃ နှစ်ကတည်းကငါလိင်စိတ်ပျောက်နေတာလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က၊ ကြက်ဆင်ကနေမထွက်မချင်းငါဟာသုံးလပဲလိင်စွဲလမ်းခဲ့တယ်။ သို့ဆိုလျှင်အဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်ပြီးနောက်ဆယ်နှစ်တာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်ကိုပျက်ပြားစေခဲ့သနည်း။ ကျွန်တော့်သီအိုရီကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းပဲ။ ပုံမှန်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့စနစ်ကကျွန်တော့်စိတ်ကိုလိုအပ်နေတဲ့အနားယူဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယူဆတယ်၊ သို့သော်မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်၏လိင်ဆန္ဒသည်မရှိခြင်းသည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောပြproblemနာတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ libido ကိုတိတ်ဆိတ်စွာသတ်ဖြတ်သူသည် hocd မှလာသည့်စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်သည်။ hocd မှလာသည့်လိင်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုကစိုးရိမ်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းစိုးရိမ်စိတ်သည် libido ကိုဖိနှိပ်သည်။ ဒီအကြောင်းပြချက်ရိုးရှင်းပါသည်။ လိင်ဆန္ဒနှင့်နှိုးဆွမှုတို့သည်အပန်းဖြေမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုလုံးဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒဆန့်ကျင်နေသည်။ Libido သည်စာနာစိတ်ဖြင့်အာရုံကြောစနစ်မှသက်ရောက်သည်။ သင်၏စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၌စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်လျှင်၎င်းသည်သင်၏ symathetic အာရုံကြောစနစ်ကိုတိုက်ခိုက်သည့်အတွက် libido ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးဖတ်တဲ့အခါမှာမီးသီးတွေကငါ့ခေါင်းပေါ်မှာကျသွားသလိုပဲ။ ဒါဟာအဆုံးစွန် "အေ့ဟေ" အခိုက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏စစ်မှန်သောလိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းမရှိသောနှစ်ပေါင်းများစွာလိင်စိတ်စွဲလမ်းမှုသည်မှားယွင်းသောနှိုးဆော်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မှားယွင်းသောနှိုးဆွမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိမ်းညွတ်မှုကိုပြန်လည်မဖော်ထုတ်နိုင်သော ၀ တ္ထုအမျိုးအစားများသို့တိုးများလာသောအခါအတွေ့အကြုံများကိုစွဲလမ်းစေသော“ ထိတ်လန့်ခြင်း” အမှန်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီ“ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်း” ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုဖြစ်စေခဲ့တယ်၊ အများစုကငါသိစိတ်တောင်မသိခဲ့ဘူး။ အဲဒီအချိန်ကကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးဆိုပေမယ့်ဒီရောဂါကကျွန်မရဲ့ libido မရှိခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာတရားခံပဲ။
ငါဒီရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုလုပ်ပြီးကတည်းကငါအတွက်အများကြီးပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေခဲ့တယ်။ ငါတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကိုသေချာမသိဘဲစိတ်စွဲလမ်းမှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏အကြီးမားဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့အခုငါဘာကြောင့်ငါ့ကိုထိခိုက်နေရတာလဲဆိုတာကိုအတိအကျရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ ယခုတွင်ငါသည်ပဟေofိ၏ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အပိုင်းအစကိုတွေ့ပြီ, ငါပိုပြီးငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်အတူယုံကြည်မှုခံစားရတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ကျရောဂါကထိထိရောက်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ ငါဟာအခုထက်ပိုပြီးပျော်လာပြီ၊ ပိုပြီးစိတ်အေးအေးနဲ့အေးဆေးတည်ငြိမ်တယ်။
ယင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုပင်ထူးခြားစေခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်လည်ပင်း / ကျောအထက်ပိုင်းမှာသက်သာသွားတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ကျောရိုးကိုပုံပါဘဲ ဒီareaရိယာသည်ဝန်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးနွေးထွေးစေသောခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေပူမှထွက်ပြီးနောက်သင်ခံစားရသည့်ခံစားချက်နှင့်တူသည်။ ဒါကငါ့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းလားဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး၊
ငါပြောင်းလဲမှုအတွက်ဘဝပြောင်းလဲနေတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနောက်သူတို့အတွေ့အကြုံအတွေ့အကြုံများစွဲသောစိတ်အမျက်ဒေါသ၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်အတူဤမရောထွေးဖို့သတိထားပါရန်လိုအပ်သည်။ ဒါပေမယ့်အခုတော့တော်တော်များနေပါပြီ၊ ကလေးဘဝကတည်းကမခံစားရသေးတဲ့အတွင်းပိုင်းအေးဆေးတည်ငြိမ်မှုကိုခံစားနေရဆဲပါ။ ဒါတွေအားလုံးကငါဘာမှားယွင်းနေတယ်ဆိုတာသိလို့ပဲ။ ကျွန်ုပ်၏အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ မသိမှုနှင့်မသိမှုများကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ငါ့ကိုမျှော်လင့်ချက်ပေးထားသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့ရသည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုထုံထိုင်းစေခဲ့သည်။
သင်သည် hocd (သို့) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနာခံခြင်းသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ခြင်းတစ်မျိုးမျိုးရှိပါက၎င်းသည်သင်၏အဓိကအာရုံစိုက်ရာဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုသင်ရှာနိုင်လျှင်အပြည့်အဝပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်သင်လုံးဝပြုလုပ်ရမည်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုမှရှောင်ရှားခြင်းသည် PMO ကိုရှောင်ခြင်းကဲ့သို့ပင်အရေးကြီးသည်။
ငါလိင်တူချစ်သူ Am .. ?? လုံလောက်အောင်လုံလောက်ပါတယ်
31: 2014 AM မေလ 03, 51, 04 အပေါ် Wilder: ကနေ quote
ဒါကပြproblemနာလားဆိုတာတောင်မှကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကစိုးရိမ်စိတ်ကိုပိုတိုးစေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မိဘများသည်လိင်တူချစ်သူများဖြစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ပြneverနာကိုတစ်ခါမှမပြခဲ့ဖူးပါ။
စဉ်ဆက်မပြတ် PMO'ing ငါ့ကိုမှီတိုင်အောင်ငါ HOCD သံသယစတင်ခဲ့သည်တိုင်အောင်။ သင်၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲသင့်ကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းမရှိသော်လည်းသင့်ဘဝကိုသံသယမ ၀ င်ဖူးသူများကဲ့သို့ခံစားရရန်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည်။
ကျွန်ုပ်၏ PMO က OCD သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်နှင့်မပတ်သက်ပါ။ ကျနော့်သီအိုရီက OCD * ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုကသင်အားလုံးအပေါ်မှီခိုနေတယ် ခွဲခြားသတ်မှတ် နှင့်အတူ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ငန်းလိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ခိုင်မာသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ရှိသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလုပ်ကြိုးစားသူအဖြစ်မြင်သည်။ ကျွန်ုပ်အလုပ်ကိုမကြိုက်တော့လျှင် OCD ကကျွန်ုပ်ကိုသံသယဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းကကျွန်ုပ်ကိုသံသယဖြစ်စေသည်။ ငါဟာသစ္စာရှိပြီးသစ္စာရှိရှိတည်မြဲတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတောင့်တတဲ့သူလို့သတ်မှတ်တယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ OCD ကထိုစဉ်ကကျွန်ုပ်၏ရည်းစားကိုမချစ်ခဲ့ပါဟုယုံကြည်စေခဲ့သည်။ ယခုတွင်သင်သည်ဤသို့ပြောနိုင်သည် - သင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်ပြိုလဲခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ငါသော်လည်းကြောင်းခံစားရပုံကိုငါသိ၏။ ဤရွေ့ကား၊ (ငါ OCD နှင့်အတူ fuck ဆိုတဲ့ရန်ကြိုးစားခဲ့သော, ငါရှိသည်စုံတွဲတစ်တွဲပိုမိုအားကောင်းတဲ့အထောက်အထားများနှင့်အတူဆက်လက်နိုင်)
ကျွန်ုပ်သည်လိင်တူချစ်သူဖြစ်သည်ဟုရိုးသားစွာယုံကြည်ပါကကျွန်ုပ်၏မိဘများကိုပြောပြခြင်းနှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိကြက်အားလုံးကိုနို့တိုက်ကျွေးရန်မလွယ်ကူပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်မှာကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့သည့်အလုပ်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ယုံကြည်ပါကကျွန်ုပ်သည်ရပ်တန့်ပါလိမ့်မည်။ ဒါပေမဲ့ငါအဲဒီလိုမခံစားရဘူးဆိုတာငါသိတယ် တစ်ခုခုငါတန်ဖိုးအထားဆုံးကတော့ identification တိုက်ခိုက်ခြင်းအားဖြင့်, ငါ၏ဦးခေါင်းနှင့်အတူ fuck ဆိုတဲ့ရန်ကြိုးစားနေခဲ့သည်။ (ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်အခန်းကဏ္ and နှင့်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုခိုင်မာစွာခွဲခြားသိမြင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းပြောစရာရှိသော်လည်း၎င်းသည်လုံးဝကွဲပြားသောဆွေးနွေးမှုဖြစ်သည်)
OCD ကသူ့အရုပ်ဆိုးသောမျက်နှာ rears တဲ့အခါမှာဘယျအရာမကအသငျသညျသူတို့အား identification သို့မဟုတ် (သင့်လိင်ကွဲများကဲ့သို့) သင်များသောအားဖြင့်ပေါ့ပေါ့ယူသူတွေကိုအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. သံသယစေသည်ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝတုံ့ပြန်မှုဒီစမ်းသပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုကအဲဒီလိုလုပ်ခဲ့ကြတာပါပဲ။ ကျွန်မတို့အလုပ်ကိုတကယ်ပျော်မွေ့လား၊ ချစ်သူရည်းစားကိုတကယ်ချစ်တာလား၊ အမျိုးသမီးတွေကိုဆွဲဆောင်နေတုန်းပဲလားဆိုတာကိုစပြီးစဉ်းစားလာတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့စတင်ငြင်းခုံရန်ကြိုးစားပြီး OCD ကကျွန်ုပ်တို့ကိုလှည့်စားသောအကြံအစည်များကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းသည်နှင့်တပြိုင်နက် OCD သည်စတင်ငြင်းခုံသည်။
နောက်တစ်ခါမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါမင်းကအရမ်းစိတ်ပူမိပြီးမင်းကိုဆွဲဆောင်ဖို့တောင်စဉ်းစားလို့မရတော့ဘူး။ မင်းဘာမှမခံစားရဘူး၊ ဒါကြောင့်သင်ထပ်သံသယဝင်လာတယ်။ “ အိုကောင်လေး၊ ငါတော်တော်လေးမိန်းကလေးကိုတွေ့တော့ * zing * တောင်မှမခံစားရဘူး .. ငါတကယ်လိင်တူချစ်သူလား” ယောက်ျားတစ်ယောက်လမ်းလျှောက်သွားပြီးသူကသူကဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ထင်တယ်။ မင်းရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကနောက်တစ်ခါထပ်ထွက်လာတယ်။
ပြproblemနာကမိန်းကလေးတွေကိုအမြဲတမ်းစပြီးကြည့်နေတာလား၊ သင်ကလိင်ကွဲသူဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုပြီးသင့်ကိုယုံကြည်လာအောင်၊ ယောက်ျားတွေကိုသင်စပြီးလိင်တူချစ်သူမဟုတ်သူတွေဆီကိုစပြီးကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ဆွဲဆောင်မှုမရှိသောအမျိုးသမီးတိုင်းသည်သင့်ကိုစိတ်ပူသည်။ သင်ထင်သောယောက်ျားလေးအားလုံးသည် (လိင်တူခြင်းလက္ခဏာမဟုတ်သော) မိန်းမကသင့်ကိုအတူတူပင်စိုးရိမ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်ဆိုးရွားသည် -“ ဟေး၊ ကောင်လေးကကြည့်ကောင်းတယ်” လို့စဉ်းစားနေမယ့်အစားမင်းကိုဆွဲဆောင်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုမင်းတွေ့တိုင်းမင်းတွေ့လိုက်ရတယ်။ သငျသညျ "ယေရှု .. ငါလိင်တူချစ်သူမဟုတ်!" သင်ထင် အရုပ်ဆိုးတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုမင်းတွေ့တိုင်းမင်းက“ အခုငါဒီကောင်လေးကိုစွဲမက်နေတယ်။ ငါသူ့ဒစ်ကိုစို့လို့ရမလား။ အဘယ်သူမျှမ fuck ဆိုတဲ့။ "
သင်သည်အမြဲတမ်းသင်သည်လိင်တူချစ်သူမဟုတ်ကြောင်းနှင့်အမျိုးသမီးများကိုစွဲမက်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုချက်ကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနေသည်။ ဒါကြောင့်သိသာထင်ရှားစွာသင်အနားယူလို့မရဘဲမိန်းမများကိုပါဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ သငျသညျအပျက်သဘောအတွေးတစ်လိုင်း၌ဖမ်းမိနေကြသည်။ တစ်နေ့လုံးကုန်သွားတယ် သင်၏အလုပ်ကိုတစ်နေ့လုံးလမ်းလျှောက်နေသည်ဟုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ “ ဒီအလုပ်ကိုငါနှစ်သက်ပါသလား။ ဒီအလုပ်ကိုငါတကယ်သဘောကျသလား။ အခွင့်အလမ်းတွေက: သင်အလုပ်ပျော်မွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဤရွေ့ကား, ငါသည်သူတို့ကကူညီမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်, HOCD နှင့် PMO related OCD အကြောင်းကိုငါ၏အကြံအစည်ဖြစ်ကြသည်။ ကတုန်းပဲတစ်ခါတစ်ရံငါ့အပေါ်မှာတကယ်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်ပေမယ့်ငါ့အသံသယ .. တက်အိုးပေါကျကှဲသည့်အခါသူတို့ကငါ့ကိုအလေးအနက်ပြောကြားလိုပါတယ်။ (ငါပြန်သွားကြသည်သာလျှင်အခါ, btw ။ )
OP ။ Craigslist မှာရှာဖွေနေရပ်တန့်, OKCupid မှာရှာဖွေနေရပ်တန့်, ချိန်းတွေ့က်ဘ်ဆိုက်များမှာရှာဖွေနေရပ်တန့်, လိင်တူချစ်သူ meetups များအတွက်ကြော်ငြာတွေ, ဘာပဲများအတွက်ကြော်ငြာများ။ သင်သည်အမြဲတစေဂေးနှင့် trannies နေဆဲသငျသညျကိုနှိုးဆှလျှင်ကြည့်ဖို့, သင့် arousal စမ်းသပ်နေကြသည်။ သင်သည်ထိုညစ်ညမ်းမှာကိုရှာဖွေနေခြင်းထက်မဆို သာ. ကောင်း၏ထင်ပါသလား? အဆိုပါ arousal ရှိနေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ dopamine ရှိနေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆွခြင်း, စိတ်လှုပ်ရှား .. အဲဒီမှာနေဆဲပါ!
ငါသည်သင်တို့ကိုပရိုဂရမ် ColdTurkey ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး Craigslist အတွက်ထားသမျှသင်သည်သင်၏လိင်သံသယစေသည် site ကိုအကြံပြုလိမ့်မယ်။ သင်သင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသံသယစေသည်သော fuck ဆိုတဲ့ SITE ကို။
အခုတော့။ အပြင်ထွက်သည်။ လမ်းလျှောက် ယူ. , တချို့လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေရ။ ယောက်ျားတွေအတူတက်ဖြည့်ဆည်း။ (မဆိုလိုလမ်းအတွက်။ ) (အလေးအနက်ထား, အရက်အပေါ်လွယ်ကူသော go) တစ်ဦးသောက်စရာရှိသွားပါ။
ပျောက်သောသူအပေါငျးတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်များအနေဖြင့်တည်းခိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၌သင်တို့ကိုကူညီပေးသည်ဆိုပါကကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါ။ ကိုသတိရပါ: သင်ဆဲ tranny ကြော်ငြာတွေမှာကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မိန်းမတို့အားဆွဲဆောင်လျှင်စမ်းသပ်စဉ်ကအရမ်း counterproductive ဖြစ်ပါတယ်။ ငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်ရန် 30 ရက်ပေါင်းရန်သင့်စိတ်ကိုကအနည်းဆုံး 60 Give သင်တို့ကိုငါနေတဲ့ခြားနားချက်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်သေချာဖြစ်၏။
မင်းကလိင်တူချစ်သူမဟုတ်ဘူး သငျသညျ trannies မကြိုက်ဘူး
* ငါဒီမှာပိုကောင်းတဲ့စကားလုံးမရှိခြင်းများအတွက် OCD ကိုအသုံးပြုသည်။ ငါ OCD fullblown ရှိသည်ယုံကြည်ကြဘူး။ PMO နှင့်ဆက်စပ်သောရုံတစ်ခု။
အကြှနျုပျ၏ hocd လီယံသွားပြီ။ ငါ hocd အတွေးတွေပျောက်ကွယ်သွားပြီဆိုတာကိုတစ်ပတ်ခန့် nofap သို့သတိထားမိသည်။ ဒါကငါနောက်ပိုင်းမှ nofap မှမထွက်ရသည့်အကြီးမားဆုံးအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရက်ပေါင်း ၉၀ မှ ၆ ရက်ကျွန်ုပ်သည်ယခုအမှတ်အသားကိုရောက်သည့်တိုင်အောင်မရပ်နိုင်ပါ။ ငါဆက်သွားမယ် အဘယ်ကြောင့်? ဒါကစာသားငါ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲနေသည်။ ကျွန်ုပ်မည်သို့ရှုမြင်သနည်း - ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်ကိုပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်၍၊ ကျွန်ုပ်၏သေးငယ်သောစွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မည်။ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးသွားသောအခါကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအိမ်ပြန်ကြသည်။ ကံကောင်းပါစေလူတော်တော်များများ hocd ပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုတာသိတယ် Nofap ဟာနောက်တစ်ခုပါ။ ဘဝဟာသေချာပေါက်ပြောင်းလဲနေပါတယ် http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/2uw8q3/do_you_have_any_questions_…
Transexual Porn နှင့်လူသားတစ် ဦး ၏ရုန်းကန်မှုများ
Neuroscientist မှ Google Talk: ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောညစ်ညမ်းသောအမျိုးအစားများ (ဘာကြောင့်လဲ) ကိုဘာကြောင့်ကြိုက်ရတာလဲ။
"ငါသည်ငါ့ HOCD ယဉ်ပါးပုံ"
လိင်တိမ်းညွတ်-OCD-သက်ဆိုင်ရာ semantic ကွန်ရက် (2017) ၏အစည်းအရုံးပိုင်းခြား
ဦးနှောက်စိတ်ကြွဆေး Dopamine အကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းအားဖြင့် OCD ရောဂါလက္ခဏာများလွယ်ကူခြင်းကိုကူညီပါနိုင်ပါစေ
Dopamine agonist ရောဂါဗေဒအပြုအမူတွေဖြစ်ပေါ်
ယစ်မူးယင်ကောင် hypersexual ရ
HOCD: လိင်တူဆက်ဆံသူ OCD & လိင် Orientation OCD
စင်ကြယ်သော OCD: တစ်ရိုင်းစိုင်းနိုးထက The Guardian သတင်းစာ
Rewiring compulsive များအတွက် Schwartz နည်းစနစ်
OCD rewiring များအတွက် Schwartz technique ကို
Monnica တီဝီလျံ, Ph.D ဘွဲ့ကိုအားဖြင့် OCD အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှေ့တိုင်းဆန် compulsive,
တချို့ကစိတ်ပညာရှင်လိင်တူချစ်သူလက်ခံမှုလိင်တူဆက်ဆံ obsessive compulsive ရောဂါ၏အသိအမှတ်ပြုမှုနှောင့်နှေးခဲ့သည်ဟုထင်
လိင် Porn အကဲခတ်ဖြောင့်ယောက်ျားများ? သူတို့ကဂေးဖြစ်ပါသလား နောဧသည်ဘုရားကျောင်းအားဖြင့်
လေ့လာမှု OCD အင်တာနက်စွဲခြင်းမှဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ပြောပါတယ်
cabergoline-ကုသ prolactinoma အတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့် hypersexuality